Qur’aanka Kariimka iyo Tarjumada Macaanidiisa | buug.ga
Suuradda Al-Mulk (Xukunka) 67
Suuradda Al-Qalam ama Nuun (Qalinka) 68
Suuradda Al-Xaaqqah (Xaqiiqda) 69
Suuradda Al-Macaarij (Waddooyinka Kor Loo Koro) 70
Suuradda Nuux 71
Suuradda al-Jin (Jinka) 72
Suuradda Al-Muzzammil (Midkii isku Duubduubay Dharka) 73
Suuradda Al-Muddasir (Kan is Daday)74
Suuradda Al-Qiyaamah (Soo Bixinta) 75
Suuradda Al-Insaan ama Ad-Dahar (Aadanaha ama Waayaha) 76
Suuradda Al-Mursalaat (Lasoo-Dirayaasha) 77
Suuradda An-Naba (Warka Weyn) 78
Suuradda An-Naazicaat (Kuwa Wax Soo Siiba) 79
Suuradda Cabasa (Wejiga Ayuu Kaduuday) 80
Suuradda At-Takwiir (Duubid iyo Beelin Nuurkeeda) 81
Al-Infidaar (Dillaacidda) 82
Suuradda Al-Mudaffifiin (Kuwa Dhima Beegga) 83
Suuradda Al-Inshiqaaq (u-kala-Dhanbalmanka Cirka Gaballo) 84
Suuradda Al-Buruuj (Xiddigaha Waaweyn) 85
Suuradda Ad-Daariq (Xiddigga Guura) 86
Suuradda Al-Aclaa (Kan Sarreynta Badan) 87
Suuradda al-Qaashiyah (Dabooshada) 88
Suuradda Al-Fajar (Beriga ama Oogga Hore) 89
Suuradda Al-Balad (Baladka) 90
Suuradda ash-Shams (Qorraxda) 91
Suuradda Al-Leyl (Habeenka) 92
Suuradda Ad-Duxaa (Barqada) 93
Suuradda ash-Sharax (Laab Fiiridda) 94
Suuradda At-Tiin (Tiinka) 95
Suuradda al-Calaq (Xinjirta) 96
Suuradda Al-Qadar (Habeenka Qaddarka) 97
Suuradda Al-Bayyinah (Xujada Cad) 98
Suuradda az-Zalzalah (Dhul Gariirka) 99
Suuradda al-Caadiyaat (Xiimayaasha) 100
Suuradda Al-Qaaricah (Qaraacdada qalbiga) 101
Suuradda At-Takaathur (Ku-Tartanka Kororsiga Adduunka) 102
Suuradda al-Casar (Waqtiga) 103
Suuradda Al-Humazah (Durayaasha Wax Ceebeeya) 104
Suuradda Al-Fiil (Maroodiga) 105
Suuradda Qureysh 106
Suuradda Al-Maacuun 107
Suuradda Al-Kawthar (Webi Kuyaal Jannada) 108
Suuradda Al-Kaafiruun (Gaalada) 109
Suuradda An-Nasar (Hiilka) 110
Suuradda Al-Masad (Xuskul la Soohay) 111
Suuradda al-Ikhlaas (Keli-Yeelidda Cibaadada) 112
Suuradda Al-Falaq (Dillaaca Oogga) 113
Suuradda An-Naas (Dadka) 114
Ammaan idilkeed iyo mahadba waxaa leh Allaah, Nabad iyo Naxariis Aliena ha ahaato addoonkiisa Muxammad bin Cabdullaah (^) korkiisa, iyo ehlu beydkisii iyo asxaabtiisii iyo cid kasta oo ku raacda xaqa tan iyo Qiyaamaha. Intaas kaddib:
Walaalayaal: Qur’aanka Kariimka waa fartiinta Alle. waa dhambaal abad iyo daa’in ah oo waara, waa mucjiso weyn uu Allaah Kor ahaaye ku soo dejiyey Nabigeennii lagu khatimay anbiyadii iyo Rususha, waxaa loogu soo dhiibay Ruuxa Aaminka ah, Jabriil, oo ku so dejiyey qalbigiisa, waa u hanuun dadka oo dhan. Waa halka laga qaato caqiidada saxa ah iyo iimaanka sugan iyo xeerarka sharciga, waa nuur u ifiya dadka jidka, waana kitaab wax tarbiyeeya oo tusaaleeya oo tilmaama si ay dadka uga baxaan mugdiyada xagga nuurka, wuxuu ku hanuuniyaa dadka sida toosnaanta badan, wuxuuna ugu bishaareeyaa mu’miniinta u dhaqma sida suubban inay leeyihiin ajar weyn (Janno..
Wuxuuna Allaah u soo dejiyey hanuun ahaan dadka, iyo caddeymo hanuun ah iyo kala bixin xaqa iyo baadilka. Wuxuu u yahay caafimaad laabaha, waa kitaab barakeysan oo marag iyo ilaaliye u ah kutubta kale oo dhan ee laga soo dejiyey xag Alle. Waa Kitaab la sugay Aayadahiisa oo laga soo caddeeyey xagga Allaah, Xikmad Badanaha, Xog ogaalka ah.
Waxaana shaki ku jirin baahida ay dadku u qabaan Kitaabkani uu ka weyn yahay baahida ay u qabaan biyaha iyo hawada, waayo martabaddiisu waa martabadda iyo halka ay nafta ka joogto jirka.
Wuxuu yiri Allaah Kor ahaaye: “Oo sidaas baan waxaan kuugu waxyoonnay [Muxammadow] Ruuxan (waxyi, iyo Naxariis) Amarkayaga ah oo ma aadan u laheyn cilmi wuxuu yahay Kitaab iyo Iimaan midna? Laakiinse waxaan ka dhignay (Qur’aankan) Nuur aan ku hanuuninno ciddii – aan doono oo ka mid ah addoomahayaga. Oo waxaad xaqiiq adigu [Muxammadow] ku hanuunisaa (dadka) Jid Toosan. Jidka Ilaahay, ee ah Kan iska leh waxa ku sugan cirarka iyo waxa ku sugan dhulka. Xaqiiq, arrimaha 00 idil ugu dambeyn waxay u aadaan Allaah (go’aan ka bixin 00 isaga baa ka arrimiya)”.
U adeegga diinta Alle darteed iyo innagoo ajar kaga Dooneyno Allaah, waxaan u guntannay howsha taijumada Macaanida Qur’aanka iyo ku fasirkiisa af Soomaali. Waxaana halkan ugu soo gudbineynaa walaalaheen Soomaaliyeed isagoo ku taijuman af Soomaali sahal ah 00 cad ay ka faa’ideysan karaan cid kasta. Waxaana ku saleennay fasrikiisa manhajka ahlu Sunnaha iyo Jamaacada gaar ahaan masa’looyinka caqiiqdada sida Magacyada Alle ee quruxda badan iyo Sifaadkiisa sare iyo qeyrkoodba. Waxaana ku dadaalnay in xaraf kasta 00 ka mid ku soo gudbinno dhigankiisa af Soomaaliga si aan u siinno tarjumada xaqeeda, marba waxa aan taijumeynno maadaama uu yahay Kitaabkii Ilaahay.
Waxaana jirta in aan tixgelin siinnay in naska Qur’aanka dhammaantiis aan wada fasimo innagoo aan waxba ka tegin waana sida la doonayo ee abbaarta ah, tusaale haddii aan arrintaasi idinka siinno Qowlka Allaah Kor ahaaye: “Wa innaka la calaa khuluqin cadiim”. Wa’da la socota innaka waxay leedahay macno 00 u dhiganta Soomaali ahaan,” Oo” sidoo kale, ‘Inna’ waxay leedahay macno waxaana la yiraahdaa xarfu towkiid waa adkeyn hadalka waxayna u dhigantaa Soomaali ahaan, ‘xaqiiq’, ‘hubaashii’, ‘dhabtii’, ‘wallee’, iwm ee loola jeedo adkeyn hadalka iyo muujinta inuu xaq yahay dhab ah, xarafka la ee la socda calaa lacalaa, la’daas ka horreysa calaa waxay leedahay macno 00 waa xarfu towkiid 00 wuxuu la macno yahay inna, mana aha intuba hadal zaa’id ah aan macno laheyn, aad bayna ugu badan yihiin xuruuftaas .00 kale Qur’aanka, waxaadna arkeysaa in badi muffasiriinta Soomaaliyeed ay ka tagaan 00 tixgelin siin, taasoo aan sax aheyn. Masalan marka 1 ay fasirayaan: “Wa innaka lacalaa khuluqin caddiim”: waxay u fasirayaan sidatan, “Waxaa ku sugnaaday dabeecad fiicatv waxay halkaas kaga tageen xarafkii waawga ee billowga Aayadda, iyo Inna iyo La’ da ku xiriirsan ee la socota calaa, sida abbaarta ahna ee vvaafaqsan naska Qur’aaniga waa in loo taijumo sidatan ah:
Oo waxaad xaqiiq Adigu (Muxammadow s|g) dhab ahaan ku sugantahay dabeecad san.” Waxaa kaloo jira in ficil maadiga, ama falka t a g a y, markii uu sagaal xaaladood ku yimaado loola jeeda ficil mudaaric fal jooga ama dhici doona, waxaana ka mid ah xaaladahaas haddii ficil maadigaa – falka tagay — uu yimaado kaddib xaraf ka mid ah xuruufta shardiga sida idaa: tusaale ahaan idaa jaa’a nasrullaahi. mark a jaa’a waa ficil maadi, laakiinse waxaa ka hor maray idaa oo xaraf shardi ah marka laguma fasirayo jaa’a yimid, ee waxaa lagu fasirayaa, “yimaado” waxaa ka mid ah xaaladahaa haddii ficil maadiga lagu billaabo hadalka, sida, ” ataa amrul laahi” laguma fasirayo waxaa yimid ee waxaa loola jeedaa wax dhici doona mustaqbalka, marka macnaha wuxuu noqon,” waxaa imanaya ama imaan doona” waxaa kaloo ka mid ah xaaladahaas marka uu ficil maadiga — falka tagay – yimaado xarfu mowsuul kaddib sida alladdii, alladiina, maa, tusaale ahaan innal ladiina aamanuu. Laguma fasirayo kuwii rumeeyey, ee waa kuwa rumeeya ama rumeysan ama rumeeyey.
Dhinaca kale waxaa jira xuruufta Carabiga qaarkeed aan laga heleyn luqadda Soomaaliga sida ^ waxaan u isticmaalnay, Th’ iyo sida £ waxaan u isticmaalnay, ‘Gh’, iyo sidoo kale J oo waxaan u isticmaalnay,’ z’ meelaha qaarkood.
Xagga Magaca Allaah, waxaan u deynay sida uu yahay, waayo ma aha sax in loo taijumo,’ Eebbe. iwm oo Magacyada Ilaahay ma aha waxa aan innagu bixin kamo. Magacyada Anbiyadana waxaa jira Labo Nabi ay Soomaalida magacyadooda yari beddelaan sida Muusaa oo ay yiraahdaan Muuse, iyo Ciisaa oo ay yiraahdaan Ciise, waxaan innagu ku magacownay Qur’aanka dhexdi waxa uu Allaah ku magacaabay oo ah Muusaa iyo Ciisaa.
Tarjamadu sideedaba ma aha howl sahlan, taijumada macaanida Qur’aanka waa kan ugu sii adag, waayo waa Mucjiso waarta oo xag Rabbi ah, marka sidee buu qof u wada ofsan kara xaqa taijumada hadal ayan isagoo kale keenj, karin jinka iyo insiga haddii ay isu tagaan oo iska kaashadaan. Waxaana la og yahay in tarjumada si kasta oo loogu dadaalo iyo heer kasta oo ay ka gaarto wanaagga inaysan gaari karin halka uu gaarsiisan yahay naska Qur’aanka ee aan lala iman karin isagoo kale. Sidaas darteed waxaan ka rajeyneynaa qof kasta oo akhriya taijumadan inuu noo soo jeediyo wixii talooyin ah iyo tusaalooyin si looga faa’ideysto dabcooyinka soo socda hadduu Alle idmo. Waxaana Ka baryayaa Allaah Kor ahaaye inuu ku anfaco walaalahay Soomaaliyeed meel iyo waa’ ay joogaanba, oo naga aqbalo camalkan Aan ku Dooneyno Wejigiisa Kariimka ah oo naga ah Dar Ilaahay. Oo noogu daro miisaanka camalladeenna wanaagsan maalin aanay wax tarayn maal iyo carruurba.
Waxaa ammaan idilkeed iyo mahadba leh Allaah, oo Nabad iyo Naxariis Ilaahay korkiisa ha ahaato Nabigeennii Muxammad, ehlu beytkiisii iyo asxaabtiisii oo dhan.
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxariista Badan.
Ammaan idilkeed iyo mahadba waxaa iska leh Allaah, Rabbiga uumanka.
Naxariistaha, Naxariista Badan.
Boqorka Maalinta Jaazeynta.
Adiga oo [keliya] baan ku caabudaynaa, oo Adiga oo [keliya] baan ku kaalmaysanaynaa.
Ee nagu hanuuni Jidka Toosan.
Jidka kuwa aad u Nicmaysay, aan aheyn [jidka] kuwa aad u Carootay, iyo kuwa dhunsanba.
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxanista Badan
Waxaa khayr iyo barako badnaaday (Allaah) oo ah Kan xukunku jiro gacantiisu oo wax walbana Kara.
Kan abuuray dhimashada iyo nolosha, si uu (dadow) idiin imtixaano bal kiinna camal wanaagsan, oo (Allaah) waa Awood Badanaha, Dambi Dhaafka Badan.
Kan abuuray toddobada cirar 00 midba midka kale ka korreeya, ku arki meysid abuurka Raxmaanka (Allaah) wax isweydaar ah. Ee ku celi aragga: “Ma ku aragtaa wax dillaac ah?
Misna ku celi aragga mar kale, waxaa kugu soo laabanayaa araggu isagoo dullaysan oo daallan.
Oo Waxaan dhabtii ku qurxinnay cirka soke Nalal, (xiddigo) oo Waxaan ka dhignay xiddigahaa kuwo lagu gano shayaadiinta, oo waxaan u diyaarinnay cadaab, Naar holceysa ah.
Oo waxaa u sugnaaday kuwa ku gaaloobay Rabbigood cadaabta Naarta, oo aayo xun.
Marka lagu tuuro Naarta, waxay ka maqli doonaan hinraag daran, iyadoo karaysa.
Waxay ku sigan inay la qaraxdo caro. Mar kasta oo lagau tuuro guuto (gaalo ah), wuxuu su’aalaa waardiyaheeda: “Ma wuusan idiin imaan dige?
waxay oran doonaan: “Haayoo dhabtii 9- vimid dige, waanse beenmnay oo ¦¦ soo dejin wax (waxyi ah), JJiaad idinku ku sugan Uhun baadi wey°-
oo waxay (gaaladu) oranayaan: Wm aan wax maqli laheyn ama isan laheyn (Xaqa), ma aanaan ahaaneyn ehlu-Naar.
Waxay qiran doonaan dambigoodu, ee’ha fogaadeen qolada Naarta Hureysa.
Xaqiiqdii! Kuwa ka baqa Rabbigood jyagoo aan arag (arag Isaga, iyo cadaabtusa Aakhirada, iwm) waxay leeyihiin Dambi Dhaaf iyo Ajar Weyn.
Ama hoos u dhiga hadalkiinna (sir (ahaan) ama saaq (kor u qaada), xaqiiqdii, (Allaah) waa Og yahay waxa ku jira laabaha (dadka).
Sow ma uu yaqaan kii abuuray (uumankiisa)? Oo waa Isaga Turid p^anaha, u Roonaanta Badan (addoomahiisa) ka War Haya (wax walba).
Waa Kan idiinka dhigay dhulka hayin, ee ku socda waddooyinkiisa, oo wax ka cuna risiqiisa (risiqa Allaah), oo Xaggiisa bay ahaan doontaa u soo Bixiddu.
Ma waxaad ka aamin tihiin in Kan (Allaah) ee ka kor ah cirka idinla goooyo dhulka, oo ay idin la dhaqdhaqaaqdo?
Mise waxaad aamin ka tihiin in Kan (Allaah) ka kor ah cirka, uu idiin soo diro dabeyl kulul (hongor ama holon) oo habaas wadata? Waadse ogaan doontaan sidee mid daran u aheyd Digniinteydii?
Oo waxaa dhabtii (Xaqa) beeniyey kuwii ka horrceyey, ee sidee mid daran u aheyd Ciqaabteydii.
Mawaysan arkayn shimbiraha korkooda dulduulaya ee mama fidinaya baalashooda oo mama isku laabaya? Ma jiro wax haya aan aheyn Raxmaanka (Allaah). Xaqiiqdii, wax walba waa uu Arkaa.
Waa kee kan idiin noqon kara ciidan idiin soo gargaara Raxmaanka sokadi? Gaaladu kuma sugna waxaan aheyn hodnaan.
Waa kee kan wax idin siin kara haddii uu (Allaah) ceshado Risiqiisa? Mayee, waxay ku talax tageen kibir iyo xaq diidnimo.
Ma mid ku socda isagoo aan waxba arkeyn wejigiisa, baa hanuunsan mise mid (wax arka) oo ugu socda si toosan oo siman Jid Toosan (Islaamka).
Dheh waa Allaah Kan idin abuuray, oo idiin yeelay maqalka (dhego), airagga (indho) iyo laabo. Yaraa inta aad shukridaan.
Dheh: Waa Allaah Kan idinka abuuray dhulka, ee Xaggiisa la idiin kulmin doono.
Waxay oran doonaan: “Waa gooima yaboohakani haddii aad run sheegeysaan.
Dheh (Muxammadow #): “Allaah baa Og (waqtiga ay ku beegan tahay) oo anigu waxaan ahay dige iska cad.”
Markayse arkaan Naarta oo ku soo dhow, wejiyada kuwa gaaloobay waxay ahaan doonaan kuwo geddisan [madow, kuduudsan. murugo saaran tahay], oo waxaa lagu oran doonaa: Waa kan (yaboohii) aad u yeeranayseen.
Dheh (Muxammadow): Bal ka warrama, haddii Allaah i halligo aniga iyo inta ila jirta, ama noo naxariisto, yaa ka badbaadin doona gaalada cadaab xanuun badan?
Dheh: “Allaah waa Raxmaanka (Naxariistaha), waan rumeynay, oo talo saarannay, waadse ogaan doontaan [gaalooy] cidda ku sugan baadi cad.”
Dheh [Muxammadow], “Bal ka warrama, haddii ay biyihiinnu dhulka ku guraan oo hoos ugu sii fogaadaan, yaa idin siinaya biyo il saafi ah oo soconeysa?”
Nuun. (Xarafkani iyo xarfaha kale ee ku soo arooray billowga suuradaha qaarkood waxay ku tusinayaan mucjisadda Qur’aanka, oo Allaah oo Keliya baa Ogsoon muraadka uu ka leeyahay iyo waxa uuulajeedo). Waa igu Qalinka iyo waxa ay (malaa’igtu) ku qoraan (kutubta camalka dadka).
Adigu (Muxammadow S) ma tihid, waa igu Nicmadda Rabbigaa, nin waalan.
Oo waxaa kuu sugnaaday (Muxammadow #) ajar aan go’eyn.
Oo waxaad (Muxammadow M) ku sugan t^ay dabeecad san oo sare.
Waad arki doontaa, iyaguna way arki doonaan,
Kiinna waalan (ama la cadaabo).
Xaqiiqdii, Rabbigaa baa Ogsoon, kan ka dhumay Jidkiisa, oo Isaga baa ogsoon kuwa hanuunsan.
Ee (Muxammadow M) ha adeecin beeniyayaasha.
Waxay jecel yihiin inaad u soo dabacdo (oo uga tanaasusho wax ka mid ah Xaqa), iyaguna kuu soo dabcaan.
Oo ha adeecin mid kastoo dhaar badan, aan qiimo laheyn.
Xamasho badan, u socod badan dira diro (nebiibnimo).
Khayr laaweye ah, xad-gudbe, dambiile ah.
macangag madax adag, intaasoo dhan ka sokow sheegato ah (shard ku dhalan).
(Wuxuu sidaa u ahaaday) sababta oo ah inuu leeyahay maal iyo wiilal.
Marka loo akhriyo Aayadahayaga (Qur’aanka), wuxuu yiraahdaa: waa sheekooyinkii dadkii hore.”
Waxaan summad kaga dhigi doonnaa sanqaroorka.
Waxaan xaqiiqdii u imtixaannay sidii loo imtixaanay qoladii beerta, markii ay ku dhaarteen inay goostaan mirihii (beerta) aroorta hore.
Iyagoon oran: Inshaa Allaah (Haddii ^ Allaah idmo).
Waxaase beertii uga yimid amar (dab) xagga Rabbigaa habeennimadiiba oo * * gubtay intii ay hurdeen.
Waxayna noqotay xaabo madoobaatay oo la shafay.
Markaasay isu dhavvaaqeen subaxii,
iyagoo leh: Ku kallaha beertiinna haddii aad goosanaysaan miraha.
Markaas bay tagecn iyagoo codka hoos u dhigaya (iyagoo ku tashaday),
Inaan beerta maanta soo gelin miskiin.
Waxayna kallaheen subaxii hore, iyagoo diiddan inuu u soo galo miskiin).
Markiise ay arkeen (beertii) sida ay noqotay, waxay yiraahdeen: “malaha waan soo dhunnay,”
Misna way is garteen oo yiraahdeen mayee waa nala dhaafiyey (mirahii) beerta.”
Markaasuu koodii u wanaagsanaa intoodii yiri: “Miyaanan idinku oran: Allaah Weyneeya oo Waxida,”
Waxay yiraahdeen: “Allaa weyn oo waaxid ah oo xumaan ka Nazahan. innaguna waannu xadgudubnay.
Markaasaa qaarba qaar ka hor jeesaday, iyagoo is eedeynaya.
Waxay yiraahdeen: Magaceen ba’ye, innagu waan xad gudubnay.
Waase intaasoo uu Rabbigeen noogu beddelo beer ka wanaagsan tani. Waxaan innagu u toobad keennay Rabbigayo (innagoo u jeedna samaan si uu noogu dhaafo denbiyadayada, oo noo siiyo ajar wanaagsan Aakhirada).
Sidatani waa ciqaabka (noloshan), ha yeeshee run ahaan, ciqaabka Aakhirada baa weyn oo daran, haddii ay ogaan lahaayeen
Xaqiiqdii, kmva ka dhowrsada xumaha (waxay ku leeyihiin Rabbigood agtiisa bccro banvaaqo ah (Janno).
Ma Muslimiinta baan kala mid dhigeynaa Mujrimiinta (Mushrikiinta, gaalada, dambiilay nasha, iwm).
Maxaad leedihiin? Sidee baad wax u guddoomisaan?
Mise waxaad heysataan kitaab aad ka akhrisaiaan.
Inaad ka heleysaan wixii doorataan?
Mise waxaad naga hcysataan ballan xaggayaga ah, gaaraya ilaa Maalinta Qiyaamaha inaad leedihiin wixii aad xukuntaan.
Weydii koodii uga ah arrinkaas damiin.
Mise waxay leeyihiin shariigyo, ha keeneen shariigyadooda haddii ay run sheegayaan.
(Xus) Maalinta marka dhudhunka feydi doono (waa Maalinta Qiyaamaha) oo waxaa loogu yeeri doonaa inay u sujuudaan (Allaah), mase karayaan (munaafiqiinta inay sujuudaan),1
Indhahoodu waxay ahaan doonaan kuwo hoos u rogan, dulli baa dabooli doona; waxayna ahaayeen (nolsoshii adduunka) kuwo loogu yeero sujuudda iyagoo fayow (laakiinse ma ay yeelin).
Ee isu kaaya daa Aniga iyo kuwa beeniya Qur’aankan; waxaan ka ciqaabi doonnaa ciqaab gaatan ah jihooyin aysan fileyn.
Oo Waxaan siin doonaa kansho. Xaqiiqdii, Qorshaheygu (tabteydu) waa mid xoog badan.
Mise waxaad (Muxammadow) weydiisataa ujro, sidaa awgeed ay la culaabeysan yihiin deyn?
Mise Ghaybka (waxa qarsoon ee aan muuqan_halkan Aayaddan waxaa loola jeedaa Allawxul Maxfuud) baa ku jira gacmahooda, oo sidaa darteed ay wax ku qoraan?
Ee ku sabar Xukunka Rabbigaa, oo ha noqonnin sidii rafiiqii nibiriga (Nabi Yuunus), markii uu noo dhawaaqday (Annaga) isagoo walbahaarsan.
Haddii aysan Nicmad xagga Rabbigi ah haleesheen, wuxuu hubaashii ahaan lahaa (mid looga tegay caloosha nibriga laakiinse waan u dambi dhaafnay) sidaa darteed wuxuu ahaa mid lagu soo tuuray xeebta bannaan isagoo eedeysan.
Waxaase doortay Rabbigi is oo ka mid yeelay kuwa wanaagsan.
Oo waxay ku sigan kuwa gaaloobay inay wax kugu yeelaan indhohooda (dhabatoda) naceyb gala awgiis markii ay maqlaan Waanada (Qur’aanka); oo waxay yiraahdaan: “Kani (Muxammad #) waa waal an yahay.
Wax kalese ma aha (Qur’aankan) aan aheyn Waano ku socoto uumanka.
*Abuu Saciid a.k.r. waxaa laga soo weriyey inuu yiri: Waxaan maqlay Nabiga s.c.w, Alle Weyne Kor ahaaye wuxuu feydi doonaa Dhudhunkiisa, markaasay dh mu’miniinta, rag iyo haweenba, u sujuudi doonaan, waxaase hari doonaa kuwaasi jirey is tuska iyo sharaf doonka. Dadka noocaasi ah waxay isku dayi doonaan inay s (Maalinta Qiyaamaha) waxayse dhabarradooda ahaan doonaan sida u taagan aan s karin. (Al-Bukhaari)
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxanistaha, Naxanista Badan.
Xaqiiqda dhaceysa (Waa Maalinta Qiyaamaha).
Maxay tahay Xaqiiqda dhaceysa?
Oo maxaa ku ogeysiiyey waxa ay tahay xaqiiqda dhaceysa?
Waxay beeniyeen qolooyinkii Thamuud iyo Caad Qaaricada (Qiyaamada).
Thamuud ahaan. waxaa lagu halaagay Qaylo Daran.
Caadna waxaa lagu halaagay dabeyl hugmeysa oo xoog badan.
Oo uu Allaah ku salliday korkooda toddoba habeen iyo siddeed maalmood oo xiriir ah; waxaad arkeysaa qoon dhexdeeda wada legdoon (la halaagay), la moodo jirrid timreed (dogob) dhacay.
Ee miyaad aragtaa wax ka haray?
Waxaa jiray Fircoon iyo kuwii ka hoireeyey iyo magalooyinkii la daba geddiyey (magaalooyinkii qoonkii Luud) ee dambiga galay.
Waxay caasiyeen Rasuulkii Rabbigood, markaasuu (Allaah) qabtay qabasho daran. 11
Waxaan Annagu markii ay biyihii xad dhaafeen (daadkii Nuux), idinku qaadnay (dadow) Doontii (uu sameeyey Nuux).
Si aan idiinkaga dhigno waano, oo u xafiddo dheg wax maqasha oo u fahanto
Ee marka Buunka la afuufo afuufid keliya (tan hore)
Oo dhulka iyo buuraha laga rujiyo meelahooda, oo la baduugo baduugid mar keliya ah
Maalintaa bay Dhacdada Weyn (Qiyaamadu) dhaceysaa.
Oo cirka u kala dillaaci doonaa gaballo, oo maalintaasi tabar yar tahay.
Oo malaa’igtu waxay ahaan doonaan ciilca gaararkiisa, oo waxaa ku sidi doona Carshiga Rabbigaa korkooda Maalintaas siddeedmalag.
Maalintaas baa dadka loo soo bandhigaya Allaah, ma jiro wax xaggooda Icagaqaisoon.
Ee kii lagu siiyo Kitaabkiisa gacantiisa midig wuxuu oranayaa: “Hooyoo, akhriya Kitaabkeyga.
Waxaan anigu rumeeyey inaan la kulmayo Xisaabteyda”
Wuxuu kaasi ku noolaan doonaa nolol laguraalli noqdo.
Beer sare gudaheed ah (Janno),
(Waxaa lagu oran doonaa) Cuna oo cabba idinkoo faraxsan, waa wixii aad soo honnaisateen maalmihii tegaye.
Kiise lagu siiyo Kitaabkiisa gacantiisa bidix wuxuu oranayaa: “Magacay ba’e waxaan jeclaan lahaa inaan la i siiyeenba kitaabkeyga.
Iyo inaan marnaba ogaadeen, sida xisaabteydu tahay?
“Waxaan jcclaan lahaa haddii taa iyada ahi (dhamishadu) ahaan laheyd dhammaadkeyga (aan nolol ka dambeyn).
Maalkeygii wax iima tarin.
Awooddeydii iyo doodaheygii waa iga baabba’een.
(Waxaa la oranayaa): “Qabta oo xir- xira.
Oo Naarta ololeysa geliya.
Oo ku xiixira silsilad ballaceedu yahay toddobaatan dhudhumood.”
Wuxuu ahaa mid aan rumeysneyn Allaah, Sarreeyaha Weyn.
Aan ku boorrin jinn (dadka) quudinta masaaknnta,1
Sidaa awgeed maanta kuma laha halkan wax saaxiib ah.
Oo kuma laha wax cunno ah milil iyo malax ma’ahee (dhacaanka ehlu Naarka).
Cidi ma cunto aan aheyn Khaadi’iinta (mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm).
Ee waxaan ku dhaartay waxa aad aragtaan (uunka muuqda).
Iyo wax aydaan arkaynba,
Inuu Qur’aankani yahay hadalkii Allaah ee loo soo dhiibay Rasuul sharaf leh (waxaa loola jeedaa Jabriil ama Muxammad S ee ka keenay Qur’aanka xagga Allaah).
Oo ma aha hadal gabayaa, waa yar tahay inta aad rumeysaan
Mana aha hadal curraafle (kaahin), waa yar tahay inta aad waantowdaan.
(Qur’aanku) wuxuu ka soo degey xagga Rabbiga uumanka.
Oo haddii uu (Muxammad i&) nagu been abuuran lahaa;
Waxaan hubaashii ku qaban laheyn Midig (gacan adag)
Oo waxaan goyn laheyn garka wadnaha.
Oo ma jiro axad idinka mid ahi oo naga celin lahaa.
Oo Qur’aankani waa u waano kuwa ka dhowrsada xumaha.
Oo Annagu waan ognahay inay jiraan qaar idinka mid ah oo beeniya (Qur’aanka).
Oo wuxuu (Qur’aankan) ku noqon doonaa qoomamo gaalada (Maalinta Qiyaamaha).
Oo (Qur’aankan) waa xaq dhab ah.
Ee ku tasbiixso Magaca Rabbigaa Weyn.
*Cabdullaah bin Camar a.k.r. waxaa laga soo weriyey inuu yiri: Nin baa weydiiyey s.c.w.: Maxaa camallo ahaan ama dhaqan islaam ahaan wanaagsan? Nabigu s.c.w. wuxu^yj^ In aad soorto (raashin siiso) saboolka, oo salaanto kuwaasi aad garaneyso iyo kuwaasi garaneynba”.(Al-Bukhaari)
Ku Billaabid Magaca Allaah. Naxariistaha, Naxariista Badan.
Weydiiye baa dheeldheel u warsaday in cadaabtu ku dhaceysa gaalada.
Cadaabtaasoo aanay jirin wax ka celin kara gaalada [oo ka imaneysa]
Xagga Allaah, Rabbiga waddooyinka kor loogu koro Ieh.
Waxay u koraan Malaa’igta iyo Ruuxu (Jabriil) xaggiisa Maalin qaddarkeedu dhan yahay konton kun oo sano.
Ee Sabar (Muxammadow JS), sabar wanaagsan
Waxay u arkaan (cadaabkaa) wax fog.
Waxaanse Ognahay inuu (aad) u dhow yahay.
Maalinta uu cirku noqon doono sida maar shuban
Oo buuruhu noqon doonaan sida cudbi la dhilay.
Oo Saaxiib wax weydiin doonin saaxiib.
Iyagoo is aikaya (waa Maalinta Qiyaamaha), Muujrimku (denbiilaha) wuxuu jeclaan doonaa inuu isaga fiirto cadaabka Maalintaasi carruuitiisa.
Iyo xaaskiisa iyo walaalki.
Iyo xigtadiisii soo dhoweyneysey,
Iyo waxa dhulka ku sugan oo dhan si uu isagu u badbaado.
Mayee! Waa Ladaa (NaarKulul).
Diiraneysa haragga madaxa.
Iyadoo u dhawaaqeysa kuwaa diiday Xaqa oo dhabarka u jeediyey.
oo maal kulmiyey oo keydiyey (oo aan Xaqa ku bixin).
Xaqiiqdii, Aadanahu waa naf jecleysi badan yahay oo sabar yar yahay
Marka uu dhib taabto waa argagaxaa.
Oo marka uu khayr helo waa bakheylaa.
Waxaan aheyn Muslimiiinta ehlu salaadka ah.
Kuwa daa’ima salaaddooda;
Oo ah kuwa maalkooda uu ugu jiro xaq la yaqaan.
Miiskiina tuugsada, iyo kuwaan wax haysan.
Oo ah kuwa rumeysan Maalinta Jaaseynta (Qiyaamaha).
Oo ah kuwa cadaabta Rabbigood ka walaacsan.
Xaqiiq! Cadaabta Rabbigaa ma jiro wax ka aamin ah.
Oo ah kuwa ka ilaaliya xubnahooda gaarka ah (galmo aan bannaaneyn, iwm)1
Xaasaskooda ma’ahee iyo (haweenka ah addoonadaha iyo qafaallada) ay gacmahoodu midig hantaan, oo (markaa) ma laha wax eed ah.
Kiise doona wax intaas dhaafsiisan, waa iyaga kuwa ah xad- gudbayaasha
Oo waa kuwa ilaaliya ammaanoo- yinkooda iyo ballamahooda;
Oo ah kuwa ku toosnaada markhaa- tiyadooda;
Oo ah kuwa u xafida salaaddooda si wanaagsan,
Kuwaas sidaas ah baa geli doona Beeraha (Jannada) iyagoo sharfan.
Ee maxay leeyihiin kuwa gaaloobay waa iyaga u soo degdega’e inay wax kaa dhageystaan (Muxanunadow), si ay kuu beeniyaan iyo si ay kuugu jees-jeesaan adiga iyo Kitaabka Allaah (Qur’aankan).
(iyagoo u fadhiya) koox koox midigta iyo bidixdaada (Muxanunadow S).
Ma wuxuu qof walba oo iyaga ka mid ahi rajeynayaa inuu galo Jannada barwaaqada?
Mayee, Waxaan ka abuumay waxa ay og yihiin.
Ee Waxaan ku dhaartay Rabbiga qorrax ka soo baxyada iyo qorrax u dhacyada inaan xaqiiq Karno;
Inaan ku beddelno (Kuwo kale) oo ka wanaagsan; oo ma nihin kuwo laga baxsado.
Ee iska daa ha (iimbadecn (xumaanta), oo ha iska cayaareen, inta ay la kulmayaan Maalinlooda loo yaboohay.
Maalinla ay ka soo bixi doonaan qu- buuraha iyagoo degdegaya sida inay u tartarmayaan calaamo loo taagay.
Indhahoodu la hogonayaan cabsi, dulli baa ka daboolaya (korka oo dhan)f Taasi waa Maalintii loo yaboohay
*Sahal bin Sacad a.k.r. wxaa laga soo weriyey inuu yiri: Rasuulkii Alle s.c.w. wuxuu yiri Qofkii ii damaanad qaada dhowrista waxa u dhexeeya labadiisa daan (waa afka iyo carrabkiisa) iyo waxa u dhexeeya labadiisa lugood (waa xubnahiisa gaarka) waxaan u damaanad qaadayaa Janno. (Bukhaari)
Anas a.kr waxaa laga soo weriyey inuu yiri: Waxaan idiin soo gudbin doonaa xadiis uusan qofna aniga gadaashay idiin sheegi doonin. Waxaan maqlay Rasuulkii A lie s.c.w. oo leh: Waxaa ka imid calaamooyinka soo dhowaanta Saacadda Qiyaame in cilmiga share iga yaraan doono (taasna waxaa keenaya dhimashada culimada u leh aqoonta diinta) waxaa soo if bixi doona jahli (oo faafi doona) waxaa soo if bixi doona zinada, waxaa badan doonaa dumarka oo yaraan doona ragga heer kontonkii haween ah ay yeelan doonaan hal mas’uul (danahooda u quma). (Al-Bukhaari)
Waxaan Annagu u dimay Nuux qoon- kiisii (Annagoo leh): “U dig qoonkaaga inta aysan u iman cadaab xanuun badan.”
Wuxuu (Nuux) yiri: “Qoonkayow! Waxaan anigu idiin ahay dige cad.
“Ee caabuda Allaah (Keliya), oo ka dhowrsada xumaha, anigana i adeeca.
Wuxuu (Allaah) idiin dhaafayaa dambiyadiinna, oo idiin dib dhigayaa ilaa muddo magacaaban. Xaqiiqdii, Ajasha Allaah marka ay timaaddo, dib looma dhigi karo, haddii aad og tihiin.
Wuxuu (Nuux) yiri: “Rabbiyow! Waxaan anigu u yeeray qoonkeygii habeen iyo maalinba.
“Umase kordhin yeeriddeydii waxaan aheyn ka carar (xaqa).
Mar kasta oo aan anigu u yeerona si aad ugu dambi dhaafto, waxay geliyaan farahooda dhegahooda dhexdooda, oo isku daboolaan dharkooda, oo ku madax adaygaan (shirkiga iyo macaasida) oo isweyneeyaan isweyneyn.
“Misna waxaan ugu yeeray (diinta) si cad (oo cod kore ah).
“Misna waxaan u ogeysiiyey si cad (guud), oo haddana ugu yeeray si gaar ah.
Waxaan ku iri: “Ka barya dambi dhaaf Rabbigiin; Xaqiiqdii; waa Dambi Dhaaf Badane’e.
“Ha idiinka keenee cirka roob weyn oo dararah;
Hana idiin kordhiyee maal iyo awlaad, oo ha idiin yeelee beero, hana idiin yeelee webiyaal.
Maxaad leedihiin oo uga cabsoon weydeen Allaah oo u qaddarin weydeen.
Isagoo idin abuuray idinkoo soo maray heerar (kala duwan) (yacni markii hore Nudfah (dhibic biyo ah), haddana xinjir, haddana goosin hilib ah).
Mawaydan arkeyn sida Allaah u abuuray toddobada cir ee kala korreeya.
Oo ka dhigay dayaxa ileys dhexdiisa ah, oo ka dhigay qorraxda nal shida?
Oo (Allaah) Wuxuu idinka keenay (ciidda) dhulka.
Haddana idinku celin doonaa gudahiisa oo idinka soo bixin doonaa baxsiis (mar kale Maalinta Qiyamaha)?
Oo Allaah Wuxuu idiinka dhigay dhulka gogol fidsan (waasic).
Si aad ugu socotaan dhexdiisa waddooyin waaweyn.
Nuux wuxuu yiri: Rabbiyow! Waa i caasiyeen, oo waxay raaceen mid maalkiisu iyo awlaaddiisu aysan u kordhin waxaan aheyn khasaaro.
“Oo waxay qooleen shirqool weyn.
“Oo waxay yiraahdeen: “Ha ka tegina ilaahyadiinna, oo ha ka tegina Wadd iyo Suwaac iyo Yaquus iyo Yacuuq iyo Nasar (magacyada sanamyadii ay caabudi jireen).
oo waxay dhabtii lumiyeen in badan, ee [Allahayow] ha u kordhin Daalimiinta (mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) waxaan aheyn habow.
Gafkoodii dartiis baa loo hafiyey oo loo gel’iyey Naar, oo, mana helin Allaah sokadi cjd u soo gargaarta.
Oo Nuux wuxuu yiri: “Rabbiyow! Ha lcaga tegin qof ka mida gaalada dhulka korkiisa.
“Waayo haddii aad deyso oo kaga tagto, waxay dhuminayaan addoomahaaga, oo ma dhali doonaan waxaan aheyn faajir gaalnimo badan.
Rabbiyow! Ii Dambi dhaaf aniga, iyo waalidkey iyo qofkii soo gala gurigeyga isagoo mu’min ah, iyo mu’miniinta iyo mu’minadaha. Oo ha u kordhin Daalimiinta (mushrikiinta, gaalada, dambulayaasha iwm) waxaan aheyn burbur iyo baabba’a
Dheh [Muxammadow] “Waxaa la ii waxyooday inay koox Jin ahi dhegaysteen [Qur’aankan]. Waxay yiraahdeen, “Waxaannu innagu maqallay Qur’aan cajab leh.
“Wuxuu wax ku toosiyaa Jidka Toosan, waanu rumeynay, oo marnaba uma shariig yeeli doono Rabbigiyo oo lama wadaajin doonno [cibaadada] axadna.
“Waxaana Sarreeya Sharafta Rabbigeen, ma uusan yeelan xaas iyo carruur midna
“Waxayna kuwa maan gaabka ahi ee dhexdeenna ah (waa Ibliis ama mushn- kiinta ku jira Jinka) ka sheegaan Allaah waxaasi ah gefka oo aan toosneyn.
“Oo Waxaan moodnay in aysan dadka iyo jinka ka been sheegeyn Allaah.
“Oo Waxaa jira rag ka mid ah insiga oo magan gala rag ku jira jinka, waxayse (jinku) u kordhiyeen (dadkaa) dambi iyo gaalnimo.
“Oo waxay u maleeyeen sida aad u malayseenba, inuusan Allaah u soo diri doonin wax Rasuul ah (dadka ama jinka).
“Oo waxaan doonnay inaan gaamo cirka, waxaanse la kulannay isagoo laga buuxiyey ilaalooyin adag iyo dhimbilo dab oo ololaya.
“Oo Waxaan ka fariisan jimay halkaa rugag si aan u wax uga dhageysanno, kiise dhegaystaa haatan wuxuu la kulmi doonaa dab ololaya oo u cimil gashan.
“Oo ma ogin, in shar lala maagay waxa jooga dhulka korkiisa, ama in Rabbigood la doonay hanuun.
“Oo waxaa naga mid ah kuwo wanaagsan iyo kuwo ka duwanba; waxaan nahay kooxo mid waliba heysato dariiqo gaar ah (kooxo diini ah oo kala duwan).
“Oo waxaan ognahay inaan uga fakan karin (ciqaabka) Allaah dhulka, oo ugama fakan kamo (ciqaabka) carar.
nka (Qur’aankan) waan rumaynay, W4 a Rabbigi kama baqo nusqaan sameeyo xagga ajarka camalladiisa wanaagsan, ama ziyaado ciqaab ahaan x«ggadambiyadiisa’
Oo waxaa naga mid ah Muslimiin, iyo al-Qaasiduun (gaalo kuwa ka day Jidka Toosan)’. ee ciddii Islaamta J^aasi waxay qaateen Hanuunka Toosan”
Kuwase ah Qaasiduunka (gaalada ka leexday Jidka Toosan), waxay ahaan doonaan xaabada Naarta,
Haddii ay dadku ku toosaan Jidka Wanaagsan (waa Islaamka) waxaan hubaashii ka waraabin laheyn biyo badan oo macaan.
Si aan ugu imtixaanno. Kiina ka jeesada Waanada Rabbigi (waa Qur’aankan oo aan ku carnal falin xeerarkiisa iyo amarradiisa) Wuxuu galin doonaa cadaab daran (waa Naar).
Oo Masaajidyada waxaa leh Allaah, (Keliya) ee ha kula baryina la jirka Allaah axadna.
Oo markii uu addoonkii Ilaahay (Muxammad 9k) istaagay isagoo baryaya Allaah (Keliya), Waxay durbaba ka sameeyeen hareerahiisa is buurasho badan (si ay u dhageystaan akhnnta Nabiga, ama waxay ku sigteen inay ku soo boodaan naceyb ay u qabaan towxiidka darti).
Dheh (Muxammadow) waxaan uun baiyayaa Rabbigay (Allaah Keliya), oo lama wadaajinayo cibaadada axadna.
Dheh: “Ma aha wax awooddeyda ku jira inaan idiin geysto dhibaato, ama inaan idin qaadsiiyo Jidka Toosan.”
Dheh (Muxammadow S): “Cidina igama cclineyso Ciqaabka Allaah (Haddii aan ku caasiyo), mana hclayo sokadi wax ciirsi iyo agab ah.
(Xilkeygu waa) oo keliya Gaarsiinta (Xaqa) ka yimid Allaah iyo Risaalooyinkiisa (towxiidka), oo kii caasiya Allaah iyo Rasuulkiisa waxaa xaqiiqdii u sugnaaday Naarta Jahannama, wuxuu ku waari doonaa dhexdeeda weligiis.
Markii ay arkaan waxa loo yaboohay, waxay ogaan doonaan cidda gargaarahiisu tabar daran yahay oo tiro yar.
Dheh (Muxammadow Jj): “Anigu ma ogi in (ciqaabka) la idiin yaboohay uu dhow yahay, ama in Rabbigay u yeeli doono waqti dhcer
(Isaga oo keliya weeyaan Allaah) Ogsoonaha Ghaybka (waxa aan muuqan ee qarsoon), umana bandhigo Ghaybkiisa (waxa qarsoon ama aan muuqan) axadna.”
Rasuul maahee (dadka ka mid ah) uu ka raalli noqday (wuxuu uga sheegaa Ghaybka intii uu doono), Wuxuuna u yeelaa koox gaar iyo ilaala ah (malaa’ig) si ay u socota hortiisa iyo gadaashiisaba ilaalo ahaan.
(Wuxuu Allaah dhowraa iyaga (Rususha) illaa uu muujiyo inay (Rusushaa) gaarsiiyeen Farrimahii Rabbigood. Oo (Allaah) waa koobay waxa xaggooda jira, wflyna u tiro kooban yihiin wax walba.
Kani isduuduubayow (waa Nabi Muxammad).
U kac (inaad tukato) habeenkii oo dhan, in yar maahee.
Barkiis (tuko) ama ka nusqaami wax yar.
Ama ka badi wax yar, oo u akhri Qur’aanka si wanaagsan.
Waxaan Annagu kugu soo dejin doonnaa Hadal cuius.
Xaqiiqdii, u kicidda habeennada (salaad Tahajjud ah) baa leh khushuuc badan oo toosan, una munaasibsan fahmidda hadalka (Allaah).
Waxaa kuu sugan maalintii howl dheer.
Ee xus Magaca Rabbigaa, oo u go1 go’id dhan.
Rabbiga qorrax soo baxa iyo qorrax u dhaca Ma jiro ilaah xaq ah aan aheyn Isaga ee ka dhigo Wakiil.
Oo u sabar (Muxammadovv sg) waxa ay yiraahdaan, oo uga dheerow iyaga si qurxoon.
Oo isu kaayo daa Aniga iyo kuwa beeniya (Aayadaheyga) Oo ah kuwo ladan oo aan siinnay raaxada adduunka. Oo u sug in xoogaa ah.
Xaqiiqdii, Waxaa xaggayaga ah heegayaal (aan ku xir-xiro mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) iyo Naar cartameysa.
Iyo cunto lagu margado, iyo cadaab xanuun badan.
Maalinta dhulka iyo buuruhu gilgilan doonaan gil-gilasho xoog leh, oo buuruhu ahaan doonaan bacaad la shubay oo hoos u soo daadaneysa.
Waxaan Annagu idiin soo dimay (dadow) Rasuul (Muxammad markhaati idinku ah, sida aan ugu soo dimayba xagga Fircoon Rasuul (Muusaa).
Wuuse caasiyey Fircoon Rasuulkii (Muusaa), markaasaan ku qabannay qabasho (cadaab) daran.
Ee sidee baad isaga celineysaan ciqaabka, haddii aad gaalowdeen, Maalin ka dhigi doonta canuurta cirroole (waa Maalinta Qiyaamaha).
Cirkuna arrinkaa darti la dildillaacayo ahaan doonana mid u kala go’an gaballo.. Yabooha (Allaah) waa mid fulaya
Xaqiiqdii, tani wa waano, sidaa awgeed kii doona, ha u samaysto xagga Rabbigi jid.
Rabbigaa waa ogyahay inaad u istaagto (salaad habeenkii) wax in yar ka yar saddex meeloodoo labo meelood habeenka, ama habeenka barkiis, ama saddex meeloodoo meel habeenka, sidaa oo kale bayna yeelaan qayb ka mida kuwa kula jira. Oo Allaah way u qaddaran tahay habeenka iyo maalinta. Wuxuu og yahay inaydaan kareyn inaad tukataan habeenkii oo dhan, sidaa awgeed buu idiinku naxariistay. Ee akhriya wixii idiin fududaada oo Qur’aan ah. Wuxuu og yahay inay idin ka mid ahaan doonaan kuwa buka, iyo kuwo kale oo ku safraya dhulka iyagoo dalbaya Deeqda Allaah; weliba kuwo kale oo u diriraya Arrinka Allaah. Ee akhriya wixii idiin fududaada oo Qur’aan ah, oo u ooga salaadda si wanaagsan oo bixiya Zakada, oo amaahsada Allaah Amaah wanaagsan. Oo wixii aad u hormarsataan nafahiinna oo jthayr ah waxaad ka heleysaan Allaah agtiisa iyagoo sii wanaagsan oo la idiin badiyey ajar iyo abaalgud ahaanba. Oo dalba Dambi dhaafka Allaah. Xaqiiqdii, Allaah waa Dambi Dhaaf Badane, Naxariis Badan.
Adigaagan (Muxammadow) isku dadayow (dharka).
Kac oo dig.
Oo Rabbigaa (Allaah) weynee.
Oo dharkaaga daahiri
Oo ka fogow Ar-Rujz (sanammada).
Oo ha u bixin vvaxna si aad u hesho ka badan (ama ha u arkin camalladaada Alle adeeca ah gallad iyo wanaag aad Allaah u galeysid ahaan).
Oo Rabbigaa dartiis u sabra
Marka Buunka (Qiyaame) la afuufo. (afuufidda labaad ee suurka);
Maalintaas waxay ahaan doontaa Maalin Daran.
Gaalada aan u fududeyn.
Isu kaayo daa aniga iyo kaan abuuray Isagoo keli ah (oo wuxuu heystaa aan jirin qaawan: Waliid bin al-Muqiirah Al- Makhzuumi, iwm).
Oo aan siiyey maal iyo hand badan.
Iyo wiilal garabu ah.
Oo aan u waasiciyey risiqa.
Oo haddana damcaya inaan u siyaadiyo;
Mayee, wuxuu ka hor yimid Aayadahayaga oo diiday.
Waxaan ku kallifi (oo dhibi) doonaa inuu la la kulmo cadaab daran.
Xaqiiqdii, waa uu fakaray, oo wax qoondeeyey;
Ee nacaladi ha ku dhacdee! Sidee buu wax u qoondeeyey.
Oo misna mar kale ha ku dhacdo F nacalade sidee buu wax u qoondeeyey.
Misna waa fakaray;
Oo wejiga ayuu kaduuday oo uruuriyey.
Markaas buu jeesasday oo is kibriyay;
Wuxuu yiri: “Kani (Qur’aanka) wax kale maahee waa sixir laga soo maanguuriyey dadkii hore.
Kanu ma aha waxaan aheyn hadal Aadane.
Waxaan galin doonaa Naarta Saqara.
Oo Maxaa ku ogeysiiyey waxa ay tahay Naarta Saqara?
Ma reebto (wax dambiile ah) kamana tagto (vvaxna iyadoon gubin, oo gamaadin).
Waxay gubtaa hargaha.
Waxaana kor jooga (ka shaqeeya) sagaal iyo toban (malaa’aig ilaalo iyo waardiyayaal Naar ahaan).
Oo kama aannu dhigin qolada Naarta xilkeeda haysa oo ilaalada ka ah waxaan ahayn malaa’ig. oo waxaan u xaddidnay tiradooda (19 ka) oo keliya imtixaan ahaan gaalada._si ay ehlu-Kitaabku (Yuhuudda iyo Nasaarada) ay u yaqiinsadaan dhabta iyo xaqiiqda (in Qur’aanka uu yahay Xaq waayo wuxuu waafaqsan yahay wixii sax ahoo aan kutubtooda laga doorin sida tiradan 19 ka eek u xusan Towraadka iyo Injiilka) • mu’miniintuna u kororsadaan Iimaan (maadaamuu Qur’aankan yahay Xaq)_, iyo si aan wax shakiyo ah loogu reebin ehlu Kitaabka iyo mu’miniinta, iyo si ay kuwa ay qalbiyadoodu ku jirto cudur (Munaafiqnimo ah) iyo gaalada u yiraahdaan: “Muxuu Allaah uga jeedaa tusaalahan? Sidaas buu Allaah u dhumiyaa kii uu doono, oo u hanuuniyaa kii uu doono. Oo ma jir wax og ciidammada Rabbigaa Isaga maahee Oo (Naar) tani wax kale ma aha aan aheyn (digniin) u xusuusin ah dadka.
Mayee, oo waa igu dayaxa,
Oo waa igu habeenka marka uu tago.
Oo waa igu subaxa marka uu caddaado.
Xaqiiqdii, iyadu (Naarta Saqara) wax kale maahee waa mid ka mid ah balaayooyinka waaweyn.
Waana u digniin dadka.
Kii idinka mid ah ee doonaya inuu hormaro (ku hormaro falasho camallo wanaagsan) ama inuu ku haro gadaal (isa- goo galaya denbiyo),
Qof walbaa wuxuu u yahay curaar (rahan) wixii uu kasbaday.
Qolada midigta maahee.
Beero (Jannada) gudaheed waxay iska wareysan doonaan,
Xaalka Mujrimiinta (Mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) (00 Waxay ku oran doonaan):
“Maxaa idin galiyey Naarta Saqara?
Waxay oran doonaan: “Kama aynu mid aheyn kuvva tukada.
“Oo ma aannu quudin jirin masaakiinta;
“Oo waxaan ahayn kuwo la tiimbada kuwa xumaanta tiimbada.
Oo waxaan beenin jimay Maalinta Jaazeynta.
Jeer ay noo timid geerida.
Sidaa darteed waxba uma tan doonto shafeecada kuwa shafeeca.
Ee maxaa heysta iyaga (waa gaalada) 00 ay uga jeestaan (qaadashada) waanada?
Sida ay yihiin dameer dibadeed didday.
Oo ka carareysa libaax.
Mayee, Qof walba oo ka mid ahi iyaga wuxuu rabaa in la siiyo waraaqo fidsan (oo ka yimid xagga Allaah, ay ku qoran yihiin in Islaamku yahay diinta xaqa ah, oo Muxammad uu kala yimid Xaqa xagga Allaah (Rabbiga cirarka iyo dhulka lwm).
Mayee! balse, kama cabsadaan Aakhirada (Ciqaabka Allaah).
Mayee, xaqiiq, (Qur’aan) kani waa waano.
Ee kii rabaa ha (akhristo) oo ha ka waano qaato.
Oo kama ay qaadan doonaan waano in Allaah doono maahee; waa Isaga Rabbiga, mudan inay aadanahu ka baqaan, oo waa Isaga Rabbiga Dambi Dhaafka Badan.
Waxaan ku dhaartay Maalinta Qiyaamaha.
Oo waxaan ku dhaartay nafta iska canaanata ka gaabinta Xaqa (waa nafta mu’minka).
Ma wuxuu aadanuhu (kan gaalka ahi) moodaa inaannaan isu keeni doonin lafahiisa?.
Mayee, Waxaan kamaa inaan sinno oo sidoodii ka yeelno farahiisa.
Mayee! (Aadanuhu wuxuu beeniyaa soo bixinta iyo xisaabta, sidaa darteed) wuxuu rabaa inuu ku sii socda gelidda dambiyada.
Wuxuu weydiinayaa: “Waa Goorma Maalintan Qiyaame (isagoo fogey sanaya)
Ee marka araggu taagmo.
Oo dayaxu madoobaado.
Oo qorraxda iyo dayaxa la isu keeno.1
Maalintaas Aadanuhu wuxuu oran doonaa: “Xaggee loo cararaa?”
May! Ma jiro agab (meel la magan galo).
Xagga Rabbigaa (Keliya) buu ahaan doonaa meesha agabka ah Maalintaa.
Maalintaas Aadanaha waxaa looga warrami doonaa wixii uu hormarsaday (oo xuinaan ah ama samaan) iyo wixii uu uga soo tegey dib (oo samaan ah ama xumaan).
Mayee! Aadanuhu wuxuu ku ahaan doonaa markhaati naftiisa (maadaamay xubnaha jirkiisa (oogada, gacmaha. lugaha, iwm) ay ka hadli doonaan wixii ka dhacay oo xumaan ah).
Haba keenee cudurdaarradiisa (si uu u daboolo falakiisa xun).
Ha dhaqaajin cairabkaaga xagga (Qur’aanka Muxammadow 48) si aad ugu dhaqsato.
Annaga baa leh inaan ku kulminno (uririnno) laabtaada iyo inaan ku siinno adiga (Muxammadow 48 awood aad ku akhrido (Qur’aanka).’
Ee marka aan akhrinno raac akhriskiisa.
Annagga bayna na saaran tahay caddeyntiisa.
Ma aha (sidaa aad mooddaan, in idinku (dadow) a an iilka la idinka soo saari doonin, oo aan la idinka jaazeyn doonin falalkiinnii). Waxaadse (idinka dadow) jeceshihiin noloshatan hadda ee adduunkan,
Oo waxaad ka tagtaan (dayacdaan) Tan (jgp) dambe ee Aakhirada.
Wejiyo qaar Maalintaas waxay ahaan doonaan kuwo ifaya oo nuur leh (waa wajiyada mu’miniinta).
Iyagoo fiirinaya xagga Rabbigood (Allaah);
Oo Wejiyo qaar, Maalintaas waxay ahaan doonaan mugdi, madow, kuduudsan, oo murugeysan). (waa wajiyada mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha iwm).
Waxayna hubtaa in lagu fali doono belaayo weyn;
Mayee, markii ay (naftu) soo gaarto kalxamaha (mergiga iyadoo sii baxeysa).
Oo waxaa la oran doonaa: “Yaa dabiibi kara oo ka badbaadin kara dhimashada?”
Oo isagu (qofka dhimanaya) uu xaqiiqsado inay tahay (waqtigii) tegidda.
Oo labada dhudhun laysku maro.
Halka laysu wado Maalintaas, waa xagga Rabbigaa (Allaah).
Mase uu rumeyn (gaalku) xaqa mana tukanin.
Laakiinse wuxuu beeniyey (Xaqa) oo jeesady.
Dabadeed wuxuu aaday xagga ehelkiisa isagoo is qaad-qaadaya.
Balaayo kugu dhacday (gaalow oo misna (mar kale) balaayo kugu dhacday.
Misna, balaayo kugu dhacday (gaalow), oo misna (mar kale) balaayo kugu dhacday.
Ma wuxuu Aadanuhu moodaa in looga tegi doonaa bilaash (ujeeddo la’aan)?
Miyuusan aheyn Nudfah (tifiq biyo shahwo ah, mani) la dhibciyo?
Markaas noqotay xinjir, oo (Allaah) abuuray oo qaab wanaagsan u yeelay.
Oo ka dhigay lammaan, lab iyo dheddig.
Miyuusan (Allaah ee fala sidaa), awoodin inuu soo nooleeyo maytida?
*Abuu Hurarya a.k.r. waxaa laga soo weriyey in Nabigu s.c.w. yiri: Maalinta Qiyaamaha qorraxda iyo dayaxa waa loo duubduubi doonaa oo la ileys tin doonaa. (Al-Bukhaari)
Miyuunan soo marin Aadanaha waqti waayaha ka mid ah isagoo aan aheyn wax la sheego?
Waxaan Annagu ka abuumay Aadanaha Nudfah (tifiq biyo shahwo ah, mani), si aynu u imtixaanno, waxaana ka yeellay mid wax maqla oo wax arka.
Waxaan tusnay jidka, haddii uu noqonayo shukriye, ama jazaaar
Waxaan Annagu u diyaannnay gaalada silsilado, dawanno, iyo dab ololaya.
Xaqiiqdii, kuwa Baarriyiinta ah waxay ka cabbi doonaan galaas (khamro xalaal) ah oo lagu dheehay biyo ka yimaada il Jannada gudaheeda ah oo la yiraahdo Kaafuur.
Il ay ka cabbi doonaan addoomaha Ilaahay oo ay burqin doonaan burqin.
Waxay (addoomahaa baarriga ah) oofiyaan nidarradooda, oo waxay ka baqaan Maalin sharkeedu fidayo.
Oo waxay quudiyaan iyagoo jecel (ama jaceyl ay Allaah u qabaan darti) miskiinka iyo agoonka iyo maxbuuska.
(iyagoo laabta ka leh) Waxaan idiin quudinnaa Allaah Darti. Mana idinka dooneyno abaal gud iyo mahadnaq midna.
Waxaan ka cabsanaynaa Rabbigayo. Maalin wejigu doorsamayo oo daran.
Markaasuu Allaah ka samata bixiyey sharka Maalintaas, oo siiyey nuur iyo farxad.
Wuxuuna ku abaal mariyey sabarkoodii dartiis Janno iyo maryo xariir ah.
Iyagoo ku dangiigsan sariiro korreeya korkooda, iyagoo aan ku arkeyn dhexdeeda kuleylka qorraxda iyo dhaxan midna.
Oo waxaa u dhow Hooska Jannada waxaana loo soo raaricin doonaa miraheeda iyagoo ah meel ay ka gaaraan oo soo qabo ah.
Waxaana lagula wareegi doonaa weelal qalin ah iyo koobab quraarado ah.
quraarado saafi ah laga sameeyey qalin, oo si fiican u qiyaasan.
Oo waxaa laga waraabin doonaa galaas (khamro xalaal ah) sharaab macaan oo lagu dheehay Sanjabiil,
Il halkaa ku taal, la yiraahdo Salsabiil.
Waxaana u adeegi doona wiilal da’ yar ah aan gaboobin. Haddi aad aragto, waxaad moodeysaa luul la flrdhiyey.
Oo marka aad aragto halkaa (Jannada gudaheeda) waxaad arki doontaa barwaaqo (aan la suureysan karin) iyo mulki weyn.
Dharkoodu waa xariir jilicsan oo cagaaran iyo xariir adag. Oo waxa lagu qurxin doonaa jin-jimo qalin ah oo Rabbigood wuxuu ka waraabin doonaa sharaab daahir ah.
(Oo waxaa lagu oran doonaa): Tani waa abaalgud iyo ajar aad leedihiin, oo dadaalkiiniina waa mid la mahdiyey.
Xaqiiqdii! Waa Annaga Kuwa kugu soo dejiney Qur’aanka adiga Muxamma- dow si heerar ah.
Ee ku sabar (Muxammadow M) Xukunka Rabbigaa, oo ha adeecin dambiile iyo gaal midna ka mid ah.
Oo xus Magaca Rabbigaa subax iyo galabba (taasi waa amrid oogidda salaa- daha Subax, Duhur, iyo Casar).
Oo inta habeennimada ah, u sujuud (taasina waa amrid gudashada salaadaha Maqrib iyo Cisho), oo u tasbiixso (tuko) in badan oo habeenka ah (Salaatu leylka).
Xaqiiqdii! Kuwakanu (gaaladu) waxay jecel yihiin noloshatan adduunka, oo waxaya mariyaan gadaashooda (oo dan u gelin), Maalin cuius (Qiyaamada).
Waa Annaga Kuwa abuuray dadka, oo adkaynnay xubnaha iyo seedahooda (hab dhiskooda jireed), oo haddii aan doonno Waxaan ku beddeli kamaa kuwo kale oo la mid ah beddelid dhan.
Xaqiiqdii! (Aayadahan Qur’aanka) vvaa dersin (vvaano), ee kii doonaa, ha u samaysto jid xagga Rabbigi (Allaah).
Waxna ma dooni kartaan, in Allaah doono maahee, Xaqiiqdii! Allaah waa wax walba Oge, Xikmad Badan.
Wuxuu geliyaa Naxariistiisa kii uu doono, Daalimiintana (mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) Wuxuu u diyaariyey cadaab xanuun badan.
Waa igu dabeylaha (lala soo diro wanaagga araa malaa’igta, ama Rususha Ilaahay) ee la soo diro iyagoo is daba joog ah.
Oo waa igu dabaylaha u kaca sida daran.
Oo waa igu dabeylaha kiciya daruuraha roobka keena;
Oo waa igu Aayadaha (Qur’aanka) ee kala saara Xaqa iyo Baadilka.
Oo waa igu malaa’igta u keenta waxyiea Rususha.
Si loo gooyo cudur daarashooyin 00 dhan, ama si loo digo;
Hubaashii, waxa la idiin yaboohay waa wax dhici doona.
Ee marka xiddiguhu beelaan nuurkooda;
Oo cirka u kala dhambatmo gaballo,1
Oo buuraha la rujiyo.
Oo Rusushii loo soo kulmiyo waqtigii loo qabtay.
Maalintee baa calaamooyinkaa loo dib dhigay?
(Waxaa loo dib dhigay) Maalinta kala saaridda (ee laga soocayo ehlu jannada, ehlu naarka).
Oo maxaa kuu ogeysiiyey Maalinta kala saariddu?
Hoog Maalintaas waxaa leh kuwa xaqa beeniyey.
Miyaannaan halaagin kuwii (ummadahii) hore?
Misna waxaan raacin doonnaa kuwa (facyada) dambe.
Sidaas oo kale baan u galnaa Mujrimiinta (mushrikiinta, gaalada, denbiilayaasha, iwm).
Miyaannaan idinka abuurin biyo liita?
Markaasna yeelnay meel aamin ah gudaheed (rixim).
Ilaa muddo la yaqaan,
Sidaa baan wax u qaddamay oo Annagaa u fiican kuwo wax qaddara.
Miyaannaan ka dhigin dhulka mid qaada?
Kuwa nool iyo kuwa mowtanba.
Oo ka yeelin dhulka dhexdiisa buuro m oo dhaadheer, oo aan idinka waraabinnin biyo macaan?
(Waxaa lagu oran doonaa gaalada) Aada wixii aad beenin jirteen.
Aada hoos (qiiqa Naarta ah) oo seddex madax leh.
Oo aan harsi laheyn, oo a an wax ka tari karin ololka (kuleylka) Naarta.
Waxayna (Naartu) tuureysaa dhimbilo daran oo daar oo kale ah.
Ama aad mooddo awr aydin ah.
Taasi waa Maalin aysan hadli doonin dadku.
Loomana idmi doono si ay u cudurdaartaan.
Tani waa Maalintii kala Baxa. Waana idin soo kulminnay idinka iyo kuwii horreeyeyba.
Ee haddii aad wax dhagri kartaan, Aniga i dhagra.
Xaqiiq, kuwa ka dhowrsada xumaha waxay ku sugnaan hoosas iyo ilo.
Iyo faakihooy in wixii ay doonaan ah.
(Waxaa lagu oran doonaa): “Cuna oo eabba si raaxo leh waa wixii aad carnal suubban fali jirteene.
Sidaas oo kale baan Annagu ku abaal marinnaa sama falayaasha.
(Gaalada waxaa lagu oranayaa): Cuna oo raaxeysta in yar (nolo shat an adduunka). Xaqiiqdii, waa idinka Mujrimiinta (mushrikiinta, gaalada, denbiilayaasha).
Oo marka lagu yiraahdo: “Tukada” ma ay tukadaan (ama marka lagu yiraahdo u hoggaansama Allaah uma hoggaansamaan)1
Ee hadalkee bay kan (Qur’aanka) kaddib rumeynayaan?
*Anas bin Maalik a.k.r. waxaa Iaga soo weriyey inuu yiri: Rasuulkii Alle s.c.w. wuxuu yiri: Waxaa la I amray inaan la diriro dadka jeer ay yiraahdaan: Laa ilaaha illal Laah. Haddii ay yiraahdaan, oo tukadaan salaaddayada oo kale, oo u jeestaan qibladdayada oo sidayada oo kale wax u gowracaan, waxaan naga xaaraan ah dhiiggooda iyo maalkooda in dambi ay galeen laga goynayo maahee si shareecada wanaafqsan, xisaabtooduna waxay saaran tahay Alle.(Bukhaari) Abuu Hurayra a.k.r. waxaa laga soo weriyey in Rasuulkii Alle s.c.w. yiri: Haddii ay dadku ogaan lahaayeen ajarka ku sugan Aadaanka, iyo istaagidda safka hore (salaadda jamaacada) oo ay helin dariiq kale aan aheyn inay u qori tuurtaan, waa ay u qori tuuran lahaayeen, haddiina ay ogaan lahaayeen ajarka salaadda Duhur (waqtigeeda hore) waa ay u tartami lahaayeen (qofka hor tegi) haddiina ay ogaan lahaayeen ajarka ku jira salaadaha Cishaha iyo Subaxa jamaaco ahaan, waa ay imaan lahaayeen inay tukadaan kolay ku yimaadaan gurguurasho.(Bukhaari)
Ma waxa ku saabsan Warka Weyn (Qur’aanka, Maalinta Qiyaamaha, iwm).
Oo ay isku khilaafsan yihiin.
Mayee, waa ogaan doonaan.
Misna, mayee waa ogaan doonaan.
Mawaannaan ka dhigin dhulka gogol?
Oo idinka abuurin lammaan?
oo ka yeelin hurdadiinna nasiino?
Oo ka dhigin habeenka hu’ (mugdigiisa idinku daboola)?
oo ka yeelin maalinta macaash doonasho?
oo aan ka dhisin korkiinna toddobo [samo] oo adag
oo ka yelin dhexdooda nal ifaya [qorraxda]
oo waxaan ka soo dejinnay daruuraha biyo badan
si aan ugu soo saarno miro iyo naq
iyo beero isku maran
xaqiiqdii, Maalinta kala-baxu waa madal [waqti la isu qabtay]
Maalinta marka Buunka la afuufi doono, oo aad imaan doontaan idinkoo kooxo ah;
Cirkana waa la furi doonaa, oo waxay yeelan albaabbo.
Oo waxaa laga socodsiin doonaa buuraha meelaboodii oo waxay ahaan doonaan sida wir-wir.
Xaqiiq, Naaitu waa cimil ku jireen,
Meel hoyaad u ah xad gudbayaasha.
Waxay ku waari doonaan gudaheeda waayo badan,
Ma ku dhadhamin doonaan dhexdeeda wax qabow ah iyo cabbitaan midna.
Biyo kulul oo karaya iyo malax maahee (dhacaanka ehlu Naarka).
Waa jaaseyn u dhiganta camalkoodii.
Waxay ahaayeen kuwo aan rajeyn xisaab (aakhiro).
Oo waxay beeniyeen Aayadahayaga beenin dhan.
Oo wax walba Waxaan ku koobnay Kitaab (Looxa Maxfuudka).
Ee Dhadhamiya idinku (mirihii xumaan faliddiinii); idiinma kordhin doonno waxaan ahayn Cadaab.
Xaqiiq, kuwa ka dhowrsada xumaba waxay leeyihiin meel liibaaneed (Janno).
Beero iyo canabyo.
Iyo naasa taagnooyin isku da1 ah.
Iyo galaas buuxa (oo khamri ah).
Ma jiro Laqwi (af lagaaddo, been, hadal aan macno laheyn) ay ku maqli doonaan dhexdeeda iyo been sheegid midna.
Waa abaal marin xagga Rabbigaa, deeq ku filan oo daa’in ah 1
(oo ah Xagga) Rabbiga cirarka iyo dhulka, iyo waxa u dhexeeya, Raxmaanka, ma jiro wax ku soo celn kara hadal (Maalinta Qiyaamaha).
Maalinta uu Ruuxu (Jabriil) iyo malaa’igtu u istaagi doonaan saf saf, cidna kuma dhici karto may la hadasho Isaga, mid maahee Raxmaanku (Allaah) u idmo, oo ku hadla hadal xaq ah.
Taasu shaki la’aan waa Maalin Xaq ah, ee kii doonaa, ha ka sameysto meel uu ku noqdo (ama jid xagga) Rabbigi (isagoo ku adeecaya (Allaah) noloshan adduunka).
Waxaannu Annagu idiinka digaynaa cadaab dhow; Maalinta uu qofku arki doono waxa (yacni camalladii) ay gacmihiisu horay u geysteen, oo gaalku oran doono: “Magcay ba’ye! maan cud noqdo.”
Waa igu kuwaa (malaa’igta) ee u siiba (nafaha gaalada iyo dambiilayaasha) si daran.
Oo waa igu kuwaa (malaa’igta) sida fudud u qaadda (nafaha mu’miniinta).
Oo waa igu kuwaa hawada dabaasha (waa malaa’igta ama xiddigaha ku dabaasha garangarahooda, iwm).
Oo waa igu kuwaa u orotama sida inay ku jiraan tartan (waa malaa’igta ama xiddigaha ama fardaha, iwm)
Oo waa igu malaa’igtaa maamula fulinta Amarrada Rabbigood, (in idinku gaalooy la idiinku yeeri doonaa xisaab).
Maalinta (marka afuufidda koowaad ee Buunka( la afuufo), (dhulka iyo buuruhu waxay u gilgilan doonaan si daran (oo qof walbaa waa dhiman doonaa)
Afuufidda labaad ee suurka (buunka) ay raaceyso (oo qof walbaa waa la soo bixin doonaa),
Qalbiyo (qaar) Maalintaas waxay la gariiri doonaan cabsi iyo naxdin.
Indhahoodu rogan yihiin.
Waxay oran doonaan: “Ma waxaa dhabtii naloo soo celin doonaa xaaladdayadii hore ee nolosha?
“Ma maikii aan noqonno lafo bololay?”
Waxay yiraahdeen: “Taasi waa noqosho khasaaro leh!”
Waa uun hal Qeylo keliya.
Mise waxayba joogaan dhulka korkiisa iyagoo nool geeri dabadeed.
Ma ku soo gaaray warkii Muusaa?
Markii uu Rabbigi uga dhawaaqay togga barakeysan ee Duwaa.
(Oo ku yiri): U tag Fircoon, waa xadgudbaye.
Oo Ku dheh: “Ma rabtaa inaad daahir noqotid.
Oo aan kugu hanuuniyo xagga Rabbigaa, kana baqdo?
Wuxuuna tusiyey Calaamad Weyn.
Markaasuu beeniyey oo caasiyey.
Oo jeesaday isagoo xumaan la socda.
Wuxuuna soo kulmiyey (askartiisii), oo kor u dhawaaqay.
Isagoo Ieh: “Waa Aniga Rabbigiin sare.
Markaasuu Allaah ciqaabay adduun iyo Aakhiroba.
Xaqiiqdii, tani waxaa ugu sugan cashar kii ka cabsanaya Allaah.
“Ma idinka baa abuurid adag, mise cirka uu dhisay?
Wuxuu kor u qaaday jurmigiisa, oo is le’ekeeyey.
Oo habeenkeeda madoobeeyey, oo soo bixiyey (iftiimiyey) maalinteeda.
Dhulkana markaas kaddib fidiyey;
Oo ka soo saaray baadkiisa;
Oo buuraha dhidbay;
Si aad ugu intifaacdaan idinka iyo xoolahiinnuba.
Markiise ay timaaddo balaayada weyni. (Waa Maalinta Qiyaamaha, iwm)
Maalinta uu Aadanahu xusuusan doono wixii uu falay.
Oo Naarta loo muujiyo qof (waliba) oo arkayo,
Marka qofkii xadguba
oo door bida nolosha adduunkan.
Xaqiiqdii, waa Naar hoygiisu.
Kiise ka cabsada hor istaagga Rabbigi, oo ka reeba naftiisa hawadaxun.
Xaqiiqdii waa Jannada hoygiisu.
Waxay wax kaa weydiinayaan (Muxammadow $&;) Saacadda, _ waa goorma waqtigeeda la qabtay?
Maxaa ku ogeysiiyey waqtigeeda?
Xagga Rabbigaa buu jiraa (cilmiga) muddadeeda.
Waxaad (Muxammadow jg) u tahay oo keliya dige kuwa ka cabsada.
Waxay ahaan doontaa Maalinta ay arkaan (Qiyaamaha), sida inaysan ku negaaadin (adduunkan) waxaan ahayn galab ama subax.
Wejiga ayuu kaduuday oo jeesaday.
Inuu halkaa ugu yimid indhoolihii darteed [Cabdullaah bin Umm Maktuum, kaasoo u yimid Nabiga isagoo diinta ugu yeerayey mid ama qaar ka mid ah duqeydii Qureysh].
Miyaadse ogtahay waa intaasoo uu hanuunooo daahir noqdo.
Ama waansamo, oo waanadu wax tarto
Ma kan mooda inuu isku filan yahay oo maanna baad.
Adigu laab raaceysaa,
oo maxaa kaa saaran haddii uusan hanuunin
Xaggase kan kuu yimid isagoo socda.
Oo ka cabsanaya (Allaah)
Miyaad adigu ka mashquuleysaa
Mayee, (ha yeelin sidaa oo kale), xaqiiqdii (Aayadaha Qur’aankani) waa waano
Ee qofkii doona ha ku waano qaata.
[Wuxuu Qur’aanku ku] yaal waraaqo loogu hayo [si weyn] sharaf [al-Lowxul Maxfuud]
oo kor ah (sharaf ahaan), lana dahiray
ku jira gacanta qorayaal (malaa’ig)
Sharaf leh oo baarriyaal ah
Nacaladi ha ku dhacdo qofka (gaalka ahi)! Muxuu jazaar yahay!
Bal maxaa laga abuuray?
Nudfah (biyo shahwo, mani) buu ka abuuray, oo u yeelay qaab wanaagsan.
Wuxuu misna uga dhigay Jidka sahal;
Wuxuu misna sababay inuu dhinto, oo qabri ku asturay;
Markii uu doonona waa uu soo bixin (mar kale).
Mayee, (aadanaha) ma uusan falin wixii uu (Allaah) amray.
Ee qofku ha fiiriyo cuntadiisa.
Annaga baa soo shubna biyaha iyagoo badan,
Waxaan markaas u jeexnaa dhulka gaballo,
Oo waxaan sababnaa dhexdiisa inay ka soo baxaan miro,
Iyo cinab iyo naq.
Iyo saytuun iyo timir.
Iyo beero tanaad ah.
Iyo faakiho iyo daaq.
Si aad ugu intifaacdaan idinka iyo xoolihiinnu.
Ee marka ay timaaddo As-Saakhah (Afuufidda, labaad ee Buunka Maalinta Qiyaamaha).
Maalintaa buu qofku wuxuu ka carari doonaa walaalki,
Iyo hooyadi iyo aabbihi.
Iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa,
Qof walba, Maalintaas, waxaa shuqlin xaalkiisa.
Wejiyo Malintaas waa kuwo nuuraya.
Oo qoslaya oo bishaareysan.
Wejiyona Maalintaas waa kuwo booreysan;
Waxaa daboolaya Madow iyo murugo.
Kuwaasi waa gaalada Faajiriinta ah.
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxariista Badan
Marka qorraxdu la duubo, oo madoobaato, lana xooro Qiyaamada).
Oo xiddiguhu soo daataan.
Oo buuraha la socodsiiyo.
Oo hasha toban siddada ah la dayaco;
Oo duur joogta la kulmiyo (qisaas).
Oo baduhu noqdaan dab ololaya oo kale ama soo butaacaan;
Oo naf walbaa lagu lammaaniyo jirkeedii;
Oo (ilmahii) dheddigta ahaa ee nolosha lagu xabaalay (sidii ay mushrikiinta Carbeed yeeli jireen) la isweydiiyo,
Denbigee baa loo dilay?
Oo waraaqaha qoran ee camallada qof kasta la furo.
Oo cirka laga rujiyo meeshiisa,
Oo Naarta la huriyo.
Oo Jannada la soo dhoweeyo.
(Markaa) naf walbaa waxay ogaan waxay carnal fashay.
Ee Waxaan ku dhaaitay xiddigaha gabbada (macnaha waa qarsooma inta maalinta ah, soo baxa (muuqda) saacadaha habeenka).
Oo waa igu xiddigaha ku socda orodka badan oo dhuumatooyinka ah.
Oo waa igu subaxa marka uu iftiimo.
Kani waa hadalka (yacni Qur’aankan waxaa keenay) Rasuul sharaf badan (Jabriil oo ka keenay xagga Allaah isagoo soo gaarsiiyey Muxamma
(Jabriil oo) awood iyo meeqaan sare ku leh (Allaah) agtiis, Rabbiga Carshiga,
Oo ay adeecsan yihiin (malaa’igta kale), lagagana kalsoon yahay halkaa (samooyinka gudahooda).
Ee (dadow) Saaxiibkiin (Muxammad) ma aha ku waalan.1
Oo wuxuu (Muxammad dhabtii ku arkay isaga (waa Jabriil) jihadii caddeyd (bariga Makka)
Oo (Muxammad jH) ma reebto cilmi ku saabsan Ghaybka (qarsoon aan muuqan).
Oo ma aha (Qur’aanku) hadalka Shaydaanka la ceyrshay.
Ee xaggee baad aadeysaan?
Kani (Qur’aanka) ma aha waxaan aheyn Waano ku socota uumanka.1
Kii idinka mid! ah. oo doonaya inuu toosnaado.
Oo wax ma dooni kartaan, in maahee (ay tahay): wax uu Allaah doonayo, Rabbiga uumanka.
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxaiiista Badan
Marka cirku uu u kala dhanbalmo gaballo
Oo badaha la qarxiyo (oo engagaan ama laysku furo).
Oo qabuuraha la soo qufo (oo u soo saaraan debedda waxa ku jira).
(Markaa) buu qofi ogaan doonaa wixii uu hormarsaday, iyo (wixii uu) dib marsaday (oo samaan ama xumaan ah
Aadanow! Maxaa kaa jeediyey Rabbigaaga, Roonaanta Badan?
Ee ku abuuray, kuna ekeeyey oo kuu simay si wanaagsan.
Oo suurad tii uu doonay kaa rakibay.
Mayee bal waxaad beenisaan Jaazeynta
Oo Waxaa Korkiinna ah (malaa’ig u xil saaran Aadanaha) si ay idiin ilaaliyaan.1
Sharaf leh, oo qoreysa (camalladiinna),
Oo ogsoon waxa aad falaysaan.
Xaqiiqdii waxay baamyadu ahaan doonaan barwaaqo gudaheed (Janno).
Oo waxay faajiriintu (mushrikiinta, gaalada, denbiilayaasha, iwm) ahaan doonaan dab ololaya gudahi (Naar),
Oo ay ku guban doonaan Maalinta Jaazeynta (Is abaal mannta)
Oo ma ahaan doonaan kuwo ka maqan xaggeeda (Naarta).
Oo maxaad ka og tahay waxa ay Maalinta Jaaseyntu tahay?
Misna maxaa ka og tahay waxay ay Maalinta Jaascyntu tahay?
Waa Maalinta uusan qofna wax u tan karin qof kale. Amarkana Maalintaas waxaa iskaleh Allaah.
Hoog waxaa leh Al-Mutaffifiin (Kuwa dhima beegga iyo miisanka oo duudsiya dadka xuquuqdooda).
Waa kuwa marka ay miisaamanayaan oofsada beegga.
Oo marka ay u wax miisamayaan dadka dhima beegga oo ka nuqsaamiya
Mawaysan kuwaasu qabin in loo soo bixin doono (si loo xisaabiyo).
Maalin weyn [Qiyaamaha]
Maalinta ay dadkoo dhammi soo hor istaagi doonaan Rabbiga uumanka.
Mayee! Xaqiiqdii, Kitaabka (camallada) Faajiriinta (mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) wuxuu ku (xafidan yahay) Sijiin.
Oo maxaa ka og tahay waxauu Sijiinku yahay?
Waa kitaab calaamadeysan.
Hoog, Maalintaas waxaa leh kuwa xaqa beeniya.
ee ah Kuwa beeniya Maalinta Jaazeynta
Oo ma beeniyo mid aan aheyn xad- gudbe, dambiile ah.
Marka loo akhriyo Aayadahayaga (Qur’aanka) yiraahda. “Waa shcckooyinkii dadkii hore.
Mayee’ bal waxaa qalbiyadooda madoobccyey wixii ay kasban jireen oo in macaasi ah 1
Mayee, waxaa hubaashii laga xijaabi doonaa (mushrikiinta, gaalada, dambiilayaasha, iwm) arkidda Rabbigood Maalintaas.
Waxayna gali doonaan Naarta hurka badan.
Waxaana lagu oran doonaa: “Waxakanu waa wixii aad beenin jirteen.”
Mayee, xaqiiqdn, Kitaabka (camallada) baaniyiintu wuxuu ku (xafidan yahay) Cilliyyuun.
Oo maxaad ka og tahay waxa uu Cilliyuunku yahay?
Waa kitaaab calaamadeysan.
Ay gacanta ku hay aan kuwa u dhow (Allaah waa malaa’igta).
Waxay xaqiiqdii baarriyiinta ahaan doonaan barwaaqo (Janno) gudaheed.
Sariiro boqoreed korkood, iyagoo ka eegaya (wax waliba).
Waxaad ka garan doontaa wejiyadooda dhalaalka barwaaqada.
Waxaa laga waraabin doonaa khamri saafi ah 00 abburan
Oo inteeda dambe (khamradaa), ahaan doonta udugga Miskiga, ee tani ha u tartameen tart am ay aashu
Waxaana lagu dheehi doonaa (Tasniim).
Waa il ay ka cabbaan kuwa Allaah u dhow.
Xaqiiqdii! (Waayihii nolosha addunka) kuwii dambaabay waxay ahaan jireen kuwo ku qoslo kuwa (Xaqa) rumeeyey.
Oo haddii ay soo ag maraanna waa isu il-jabin jireen (jees jees ahaan).
Oo marka ay u laabtaan ehelkoodii waxay laaban jireen iyagoo ku maaweeleysanaya,
Oo marka ay arkaan, waxay oran jireen: “Xaqiiqdii! Kuwakanu waa dhunsan yihiin.”
Loomase dirin (mushrikiinta, gaalada, denbiilayaasha, iwm) ilaaliyeyaal ahaan korkooda (mu’miniinta).
Maalintan (Maalinta Qiyaame) kuwii (Xaqa) rumeeyey waxay ku qosli doonaan gaalada.1
Sariiro boqoreed (sare) korkood, iyagoo ka eegaya (wax waliba).
Ma waanan laga goyn gaalada wixii ay -f i-^ fah jireen?
Markii ay samadu jeex-jeexanto.
Oo adeecdo Rabbigeed, waana Xaq adeeciddiisu;
Oo marka dhulka la fidiyo,
Oo u soo tuuro debedda wixii ku jiray gudahiisa oo ka mamaado,
Oo ay adeecdo Rabbigeed, waana Xaq adeeciddiisu.
Aadanow! Waxaad u dhibtoon oo aad u carnal faleysaa xagga Rabbigaa dhibtood, marka waad la kulmi doontaa (natiijooyinka camalladii aad fashay).
Xagga kan lagu siiyo Kitaabkiisa gacantiisa midig,
Waxaa la xisaabin doonaa xisaab fudud.
Oo u laaban doonaa reerkiisa isagoo faraxsan.
Qolkiise laga siiyo Kitaabkiisa dhabarkiisa gadaashiisa,
Wuxuu uyeeran doonaa hoog.
Oo geli doonaa naar ololeysa.
Wuxuu ahaa mid Ehelkiisa dhexdooda kibirsan.
Wuxuu moodayey inuusan mamaba u soo noqoneyn xaggayaga.
Mayee, Xaqiiqdii, Rabbigiis baa u jeeday.\_
Ee Waxaan ku dhaartay cir gaduudda gabbal dhac;
Oo waa igu habeenka iyo wax kasta uu ku daboolo mugdigiisa;
Oo waa igu dayaxa marka uu buuxsamo.
Waxaad hubaashii mari doontaan heerar kala duwan (noloshan iyo Aakhiradaba).
Ee muxuu arrinkoodu yahay, oo ay u rumeyn waayeen.?
Oo marka loo akhriyo Qur’aanka ula dhici waayeen sujuud.
Mayee, kuwa gaalooba waxay beeniyaan xaqa 1
Oo Allaah waa og yahay waxa ay dhitaystaan (oo camallo san iyo kuwo xunba ah).
Ee ugu bishaaree cadaab xanuun badan.
Hase ahaatee kuwa (xaqa) rumeeyey oo falay camallo wanaagsan oo suubban waxay leeyihiin ajar a an marnaba go’i doonin (waa Jannada).
Waa igu cirka leh xiddigaha waaweyn (iyo rugaha xiddigaha ay maraan).
Oo waa igu Maalinta laysu yaboohay (Maalinta Qiyaamaha).
Oo waa igu Maalinta fureysa markhaatiga (Maalinta Jumcaha) iyo maalinta la shaahido (Maalinta Carrafo).
Ee Nacaladi ha ku dhacdo qolada godkii (lagu caddibayey mu’miniinta).
Ee ahaa Naar lagu saaday (in badan) 00 shidaal ah.
Gaaladuna ay kor fadhiyeen (godka).
Iyagoo daawanaya wixii ay ku falayeen 00 dulmi ah Mu’miniinta (waa gubiddii ay gubayeen mu’miniinta).
Kumana ay gelin waxaan aheyn inay rumeeyeen Allaah, Awood Badanaha, Mudan mahad iyo ammaan 00 dhan.
Ee, iska leh mulkiga cirarka iyo dhulkal Oo Allaah wax walba waa u Jeedaa.
Xaqiiqdii, kuwa Janiba mu’miniinta iyo mu’minadaha, 00 aan u toobad keenin (Allaah) waxay leeyihiin cadaabta Naarta Jahannama, 00 waxay leeyihiin cadaabta Naar gubeysa.
Xaqiiqdii, kuwa (xaqa) rumeeyey 00 falay camallo wanaagsan 00 suubban, waxay leeyihiin Beero hoostoodu ay webiyo qulqulayaan. Taas baa ah Liibaanta Weyn.
dii (Muxammadow ^ Qabashada l^aqliq.nab bigaa waa daran tahay
Vaaiiqdii, Waa isaga Allaah Kan 1| (UUnka) oo soo celinaya (Maalinta Qiyaamaha]
Waa Isaga Dambi Dhaaf Badanaha, Carshiga, Sharafta Badan. i uu Doono.
Ma kn800 8aaray war^a ciidammadii,
Mayee! Kuwa gaaloobay waxay ku sugan yhihin beeninta (Nabi Muxammad iyo Qur’aanka).
Oo Allaah baa ka koobay gadaal (macnaha waa acmaashooda oo idil waa ogsoon yahay, oo waa uu ka abaal marin doonaa).
Mayee! Kani waa Qur’aan Sharaf Badan.
Oo ku qoran Looxa Maxfuudka.
Waa igu cirka iyo Xiddigga guura.
Oo maxaa ku ogeysiiyey waxa uu (xiddiga guura) yahay?
(Waa) xiddig iftiin badan.
“Naf walba waxaa kor jooga ilaaliye (waa malaa’igta u xil saaran qof walba oo ilaalineysa, qoreysa camalladiisa wanaagsan iyo kuwa xunba, iwm).
Ee ha fiiriyo aadanuhu waxa laga abuuray.
Waxaa laga abuuray biyo horay u soo booda.
Oo ka soo baxaya inta u dhaxeysa laf dhabarta iyo kalxamaha,
[Allaah] waa uu awoodaa inuu u soo celiyo nolosha.
Maalinta la soo saarayo siraha iyo wixii qarsoonaa.
Ma leh (aadanuhu maalintaas) xoog iyo wax u gargaara midna.
Waa igu cirka soo celinta badan (oo sidoo kale keena roobka soo noq-noq-da).
Iyo dhulka dil-dillaca badan (ee soo saara dhirta iyo daaqa),
Xaqiiqdii, Kani (Qur’aanku) Waa hadal kala saara (xaqa iyo baadilka), oo amra xeerar sharci ah aan dhayal aheyn oo dan u ahaadanaha si loo dabar gooyo shar oo idil).
oo ma aha dhayal (dheel ama wax loogu tala galay maaweelo iyo madadaallo)
iyagu [gaaladu] wax bay qooliyaan
oo anigu [sidoo kale] waxaan qorsheynayaa qorshe
ee u sug [gaalada] wax yar.
Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxariista Badan.
Nazah oo weynee Magaca Rabbigaa, ee Sarreeya
Kan abuuray (uunka) oo ekeeyey.
Oo ah Kan qaddaray (yacni horay u qoray dhacdooyinka ku dhici qof iyo shey walbaa xitaa haddii uu qofku noqonayo saciid (liibaane) ama shaqi (luufluufe); dabadeed tilmaamay (macnaha waa tusay Aadanaha jidka toosan iyo jidadka xun, oo ij tilmaamay xoolaha inay daaqaan).
Oo ah Kan soo saara daaqa.
Oo ka dhiga xaabo madow.
Waxaan kuu akhrinaynaa (Muxammadow) Qur’aanka mana illaawi doontid.
Wixii Allaah doono ma’ahee, Wuxuu ^8 yahay waxa muuqda iyo waxa qarsoonba.
Oo Waxaannu kuu fududeyn doonnaa (Muxammadow waddada fudud.
Ee waani (dadka) marka ay wax tareyso waanadu.
Waxaa qaadan doona waanada qofka ka cabsanaya (Allaah).
Waxaana ka fogaan doona hoogaha.
Kaasoo geli doona Naar weyn.
Isagoo aan ku dhimaneyn dhexdeed, kuna noolaaneyn (nolol fiican).
Waxaa dhabtii liibaanay qofkii daahiriya naftiisa (ee ka fogaada shirkiga iyo macaasida).
Oo xusa Magaca Rabbigi (waa aan caabudin cidna Allaah maahee) 00 tukada shanta salaadood ee faralka ah iyo Nawaafisha (salaadaha dheen’ga).
Mayee’waxaad doorataan noiosha adduunkan;
Aakhirada baase khayr badan oo daa’insan.
Waxay Xaqiiqdii tani ku taal Kututbtii hore,
Kutubtii Ibraahiim iyo Muusaa fist).
Ma kuu yimid warkii dabooshada (Qiyaamaha).
Wejiyo Maalintaas waa kuwo dulleysan.1
Ugu camal fasha (si adag noloshan adduunka iyagoo daacad u ah ilaahayo kale oo baadil ah) oo ku daala.2
Waxay geli doonaan Naar kulul.
Waxaa laga waraabin doonaa il kulul oo kareysa.
Ma laha wax cunto ah aan aheyn geed sun ah oo qodxa badan.
Oo aan wax cayilanaynin, gaajona wax katareyn.
Wejiyo (kale) Maalintaas, waa kuwo nicmeysan.
Oo ku raalli ah ku dadaalkoodii.
Ku jira Beer sare (Janno).
aysan ku maqli doonin hadal dhiba iyo beenmidna.
Waxaa ah gudaheeda (jannadaa) il socota.
Waxaa ah gudaheeda sariirro la kor yeelay.
Iyo koobab la hor dhigay
Iyo baikimooyin la safay.
Iyo gogol la fidiyey.
Mawaysan fiirineynin geela, sida loo abuuray?
Iyo ciika, sida loo kor yeelay?
Iyo buuraha, sida loo taagay?
Iyo dhulka, sida loo fidiyey?
Ee waani (Muxammadow ^), waxaad adigu tahay waaniyee.
Ma tihid mid qasab ku leh.
Hase ahaatee qofkii jeesada oo gaalooba;
Wuxuu Allaah cadaabi doonaa cadaab aad u weyn.
Xaqiiqdii, Xaggayaga bay u soo noqon doonaan (khalqigu);
Oo Annaga baa xisaabin doonna.
Ku Billaabid Magaca Allaah, Naxariistaha, Naxariistaha Badan
iyo habeennada tobanka ah (waa jM naalmood ee ugu horeeya bisha
oo waa igu tirada siman iyo tan is dheer.
Miyeynan kuwaa (dhaarahaa kore) aheyn wax loogu dhaarto qof caqli leh (si uu uga joogo shirkiga iyo macaasida, iwm).
Mawaadan (Muxammadow H) ogaan sida Rabbigaa u galay (qoonkii) Caad?
Ee ahaa Iram lahaana tiirarka dhaadheer.
Aan wax la mid ah lagu abuurin dhulka.?
Iyo (sida uu u galay) dadkii (Thamuud), eekaladhambalayey dhadhaabyo waaweyn tog gudahi ah (si ay uga sameeyaan daaro quixoon).
Iyo (sida uu u galay) Fircoon, ee tiirarka lahaa?
Kuwaasoo ku falay xadgudub dhulka.
Oo ku badiyey fasahaad dhexdiisa.
Markaasuu Rabbigaa ku shubay korkooda noooyo kala duwan oo cadaab daran ah.
Xaqiiqdii, Rabbigaa waa u darban yahay (abaal marinta)
Xagga aadanaha, marka uu Rabbigi lmtixaano, oo sharfo oo u nicmeeyo wuxuu yiraahdaa (isagoo isla weyn): “Rabbigay waa i sharfay.”
Markase uu imtixaano oo ku ciriiriyo maalka, wuxuu yiraahdaa; “Rabbigay waa i liiday.”
Mayee bal ma daiyeeshaan agoomaha.
Oo iskuma boorrisaan quudinta miskiinka.
Oo waxaad ku cuntaan xaqdarro dhaxalka si hunguri leh.
Oo waxaad jeceshihiin Maalka jaceyl daran.
Mayee! Marka dhulka laga dhigo budo_digada,
Oo yimaado Rabbigaa oo malaa’igtu (timaaddo) iyagoo saf saf ah.
Oo la keeno Maalintaas Naarta meel dhow. Maalintaas buu Aadanuhu waansami doonaa, maxayse waantoobidda (maikaa) tareysaa
Wuxuu oran doonaa: “Hoogayeey! Haddii aan u soo hor marsan lahaa (camallo wanaagsan) noloshayda (tan).
Maalintaas, cidna uma cadaabto sida uu (Allaah) wax u cadaabi Doono.
Oo cidi wax uma xirxirto, sida uu (Allaah) wax u xirxiri doono.
(Oo waxaa lagu oran doonaa qofka mu’minka) “Naf yahay xasilloon.
“Unoqo Rabbigaa, jadigoo raalli ah oo uallilagaa yahay.
“Dhex galna addoomaheyga wanaagsan.
“Oo gal Jannadeyda.”
Waxaan ku dhaartay magaaladan (Maldcah).
Oo adiga (Muxammadow jg’g) waan ku banneeyyey (inaad saacad keliya ku dagaasho maalintii furashada) magaaladan gudaheeda (Makkah),1
Oo waa igu waalidka (Aadam) iyo waxa an dialay (Duniyadiisa).
Waxaan xaqiiqdii dadka abuumay iyagoo kala kulmi doona dhib iyo daal (idduunka).
Ma wuxuu moodayaa inaysan cidna awood ku lahayn?
Wuxuu yiraahdaa (si faan leh iyo isla weyni) Waxaan bixiyey maal badan (si Xaqa loo hoijoogsado).”
Ma wuxuu moodaa inaysan cidna arkayn?
Miyaanaan u yeelin labo indhood?
Iyo canrab iyo labo bishimood?
oo aan tusin labada jidood (jidka wanaagsan iyo jidka xun)?
Ma uusan sameyn wax dadaal ah si uu uga gudbo jidkaa ahjiirta?
Oo maxaa ku ogeysiiyey (waxaa looga gudbo)jidkaa ahjiirta?.
Xoreyn qoor (addoon).
Ama siin cunno maalin gaajo.
Agoon qaraabo ah.
Ama miskiin tabaaieysan.
Isla markaasna (kaas wax la baxaya) uu ka mid yahay kuwaa (xaqa) rumeeyey, oo iskula dardaarma sugnaanta iyo sabarka, oo (sidoo kale) iskula dardaanna naxariista.
Waa kuwaas qolada Midigta. (ehlu jannada),
Kuwase ku gaaloobay Aayadahayaga (xujooyinka, waxyiga iwm) waa kuwaas qolada Bidixda (ehlu Naarka).
Naarta waxaa looga xiri doonaa dusha.
Waa igu qorraxda iyo iftiinkeeda;
Oo waa igu dayaxa marka uu raaco (qorraxda).
Oo waa igu maalinta marka ay caddaato.
Oo waa igu habeenka marka uu inadoobaado.
Oo waa igu cirka iyo Kan (waa Allaahe) dhisay;
Oo waa igu dhulka iyo Kan (waa Allaahe) gogJay,
Oo waa igu nafta iyo Kan (waa Allaahe) ekeeyey.
Ee tusiyey wixii u daran iyo wixii u dan ah, oo taqwo ayo toosnaan ah.
Waxaa dhabtii liibaanay qofkii daahinya naftusa (macnaha waa adeeca oo guta dhammaan waxa uu Allaah waajibiyey, oo ka fogaada shirkiga iyo macaasida).
Oo waxaa dhabtii hoogay qofkii dacdarreeya naftiisa (la yimaada shirki iyo macaasi.).
Waxay (dadkii) Thamuud beeniyeen (Xaqa) kibirkoodii darti.
Waa tii uu koodii uga sharka badnaa soo baxay, (si uu u dilo Hashii loogu soo bixiyey mucjiso aha ant a).
Oo Rasuulkii Allaah (Saalix) ku yiri: “Iska daaya Hasha Ilaahay! (ha dilana) oo ha ka hor istaagina aroorkeeda.”
Waase beeniyeen, oo dileen Hashii. Sidaa awgeed Rabbigood baa baabbi’yey dambigoodii darti is, oo ka simay cadaabtii.
Oo (Allaah) kama uu cabsndo waxn ka dhalan (baabbi’intaa) iyo ciribtccda (yacni in dakano loo raacdo, godob, iwm).
Waa igu habeenka marka uu wax daboolo.
Oo wa igu maalinta marka ay soo caddaato;
Oo waa igu Kan abuuray labka iyo dhedigga.
In camalkiinnu (dadow) kala duwan yahay.
Ma qoikii wax bixiya, (sako, sadaqo, iwm) 00 ka cabsada Allaah.
Oo rumeeya Al-Xusnaa (Tan wax u wanaagsan: waa Towxiidka yacni Laa ilaaha illal laaah ama Jannada)
Waxaan u fududeyn doonaa Jidka fudud. (samaanta)
Qofkiise hunguri badan (damac badan dhabcaalka masuugidda badan) 00 is mooda inuu isku Ulan yahay.1
Oo beeniya tan wanaagsan (Towxiidka ama Jannada).
Waxaan uga dhigi doonnaa wax fudud jidka xun;
Oo muxuu maalkiisu u tari doonaa marka uu halaagsamo. ‘s’ HCy
Annaga baa wax hanuuninna,
Oo Annaga baa leh tan dambe Aakhirada) iyo tan horeba (adduunkan).
Ee waxaan idiinka digayaa Naar olol iyo bur badan.
Ma geli doono waxaan ahayn qof xun,
Kan (Xaqa) beeniya oo jeesada.
Waana laga fogeyn doonaa (Naarta) kan ka dhowrsada xumaha
Ee bixiya maalkiisa si uu u daahir noqdo.
Isagoo uusan jirin cid ku leh abaal oo laga sugayo inuu gudo.
Ee wuxuu wax u bixin Wejiga Allaah darti, ee Sarreeya
Wuuna raalli noqon doonaa.
Waa igu Barqada.1
Oo waa igu habeenka marka uu madoobaado.
Inuusan kaa tagin (Muxammadow 5®) Rabbigaa, ookuucaroon.
Oo Aakhirada baa kaaga khayr badan tan bore (noloshatan adduunka)
Oo wuxuu Rabbigaa ku siin doonaa (wax f kastoo wanaagsan) waadna raalli noqon.
Miyuusan ku helin adigoo (Muxammadow 5®) agoon ah 00 ku hoyaadin?.
Oo Miyuusan ku helin adigoo aan war u heyn (Qur’aanka. iyo axkaamtiisa, iyo Nabinnimo iwm) oo kuma hanuunin?
Oo Miyuusan k u helin adigoo sabool ah 00 kaa yeelin hodan (isku filan qaneecona kuu dheer tahay)?
Re ilmaha agoonka ahhadhibin.
Kan wax wey diisanna ha canaanan;
oo Nicmadda Rabbigaa [waa Nabinnimada iyo dhammaan galladaha kale] ka sheekee [oo ku mahdi].
Miyaannaan kuu waasicinnin laabta (Muxammadow)?
Oo aan kaa dejin culeyskaagii,
ee cusleeyey dhabarkaagii?
oo aannaan kor yeelin magacaaga?
ee xaqiiq culeyska (ciriiriga iyo dhibka) waxaa la so fudayd dhow)
Waxaa xaqiiq dhibka la socda faraj.
Ee markii aad bogto (howshaada), u staag cibaadada Allaah (macnaha waa u istaag salaad).
Oo xagga Rabbigaa (keliya) ula qasad (dhammaan muraadyadaada, rajooyinkaaga iyo ducooyinkaaga.
Waa igu Tiinka iyo Saytuunka.
Oo waa igu Buurta Siinaay.
Oo waa igu magaaladan Aaminka ah (Makkah),
Waxaan dhabtii u abuumay Aadanaha qaab kan u wanaagsan
Kaddibna waxaan u celinnay hooseeyay aasha kan u hooseeya.
Hase yeeshee kuwa (Xaqa) rumeeyey oo falay camallo wanaagsan oo suubban, waxay leeyihiin ajar aan go’ynin (Janno).
Ee maxaa sababa idinka (gaalooy inaad beenisaan jaaseynta (Maalinta Qiyaame).
Sow ma aha Allaah Kan u wanaagsan inta wax xukunta?
Akhri! Ku billaabid magaca Rabbigaa, ee abuuray [uunka oo idil]
Ka abuuray aadanaha xinjir
Akhri! Oo Rabbigaa waa Roonaan badanaha
Kan baray [aadanaha] sida qalinka wax loogu qoro
Baray aadanaha wax uusan aqoon
Mayee! Xaqiiqdii, aadanuhu waa xadgudbaa
Marka uu arko inuu deeqtoonaaday
Hubaashii! Waa xagga Rabbigaa noqodku
Ma waad [Muxammadow] aragtay midka [Abu Jahal] ka reebaya
Addoon [Muxammad] marka uu tukado?
Bal ka warran haddii [Muxammad] uu ku sugan yahay hanuunka [Allaah]?
Ama uu amro toosnaan?
Bal ka warran haddii [gaalkaa, Abuu Jahal] beeniyo [Xaqa, waa Qur’aankan] oo ka jeesado?
Ma wuusan ogeyn in Allaah arko [waxa uu falayo]?
Mayee! Haddii uusan [Abuu Jahal] meel joogin, waxaannu qaban doonnaa foodda.
Food beenley ah oo gefley ah.
Ee ha u yeerto golihiisa.
Waxaan u yeeri doonnaa ilaalada Naarta [si ay wax uga qabtaan].
Mayee [Muxammadow!] Ha adeecin, oo sujuud, oo u dhowow [Allaah].
Waxaannu xaqiiqdii soo dejinnay (Qur’aanka) habeenka Qaddarka dhexdiisa.
Oo maxaa ku ogeysiiyey wuxuu habeenka Qaddarku yahay?
Habeenka Qaddarku wuxuu ka fiican yahay kun bilood (83 sano iyo afar bilood).
Waxaa soo dega malaa’igta iyo Ruuxa (Jabriil) Idanka Allaah iyagoo la soo dega xukunno oo dhan,
Nabad! (habeenkaa oo dhan, waxaa jira nabad iyo samaan xagga Allaah ah oo ay leeyihiin addoomahiisa (Xaqa) rameeyey) ilaa waagu ka baryo.1
Ma aha kuwii gaaloobay oo ka mid ahaa ehlu Kitaabka (Yuhuudda iyo Nasaarada) iyo mushrikiinta kuwa ka tagaya (gaalni- madooda) iyada oo ay timaaddo xujo cad maahee.
Oo ah Rasuul [Muxammad] ka socda xagga Allaah oo akhriyaya kutub daahir ah.
Ka kooban xukunno fiican.
Oo isma khilaafm ehlu Kitaabka (Yuhuudda iyo Nasaarada) jeer ay u timid Xujo Cad (Nabi Muxammad j£i).
Lamana amnn waxaan aheyn may caabudaan Allaah iyagoo u Keeli yeelaya cibaadada iyagoo toosan, iyo inay oogaan salaadda oo bixiyaan Zakada, oo sidaas baa ah diinta toosan.
Xaqiiqdii, kuwa gaaloobay oo ka mid ah ehlu-Kitaabka (Yuhuudda iyo Nasaarada) iyo mushrikiinta waxay gali doonaan Naarta Jahannama iyagoo ku waaraya gudaheeda. Kuwaasina waa kuwa ugu sharka badan uumanka.1
Xaqiiqdii, kuwa (Xaqa) rumeeyey, oo fala camallo wanaagsan oo suubban, kuwaasi waa kuwa ugu khayr badan uumanka.
Abaalkooda Rabbigood agtiis ah waa Beero negaadi ah (Jannati Cadni) oo ay hoostoodu webiyadu qul-qulayaan, ay ku waari doonaan dhexdeeda weligood, Allaah Raalli buu ka yahay, iyaguna Raalli ka yihiin. Sidaas waxaa leh kii ka baqa Rabbigi (Allaah).
Marka arlada la gilgilo gilgilkeeda [kama dambeysta ah).
Oo arladu soo bixiso culeysyadeedii [wixii ku aasnaa]
Oo aadanuhu yiraahdo: “Maxay leedahay?
Maalintaas waxay ka wairami doontaa akhbaarteeda (la xiiiira dhammaan wixii lagu sameeyey korkeeda [khayr ama shar].
Waayo Rabbigaa baa u waxyooday.
Maalintaas dadku wuxuu u dareeri doonaa guutooyin firarsan ahaan si loo tusiyo camalladoodii.
Ee qofkii fala samaan le’eg saxar [ama quraanyo yar] waa arki doonaa.
Oo qofkii fala xumaan le’eg saxar [ama quraano yar] waa arki doonaa.
Waa igu (fardaha) u orda (jihaadka) iyagoo hinraagaya.
Oo ku shida madag dab ah (qoobobkooda).
Oo qaada duullaanka oogga hore,
He booika kiciya,
Oo bartanka u gala kulanka (cadowga),
Xaqiiqdii! Aadanuhu (kan gaalka ahi) waa ka abaal dhacaa Rabbigi.
Oo isaga baa taasi ka markhaati ah.
Waana ku daran yahay Jcclaanta maalka
Ma wuusan ogeyn marka la soo bixiyo wax a ku jira qabuuraha.
Oo la caddeeyo waxa ku jira laabaha.
Xaqiiqdii, Maalintaas (Maalinta Qiyaamaha) Rabbigood waa u Xog-Ogaal (camalladooda, oo ka abaal marin doonaa)
Al-Qaaricah [Garaacdada qalbiga]
Maxay tahay [Garaacdada qalbiga]
Oo maxaa ku ogeysiiyey waxay Garaacdada qalbiga tahay?
Waa Maalin ay dadku noqon doonaan sida balanbaalisooyin la firdhiyey.
Oo buuraha noqon doonaan sida cudbi la dhilay.
Ma qofkii uu cuslaado miisaankiisa [camallada wanaagsan] ah.
Waxaa idin shuqliyey (dadow) wax badsasho (iyo isu faanid).
Ilaa aad ka siyaarataan qabuuraha (dhimataan)
Mayee! Waad ogaan doontaan
Misna, mayee! Waad ogaan doontaan.
Mayee! haddii aad og tihiin ogaansho dhab ah (ciribta dalowsiga adduun, kuma aydaan mashquulin laheyn nafahiinna waxyaalaha aduunka idinkoo ka dooranaya Aakhirada).
Xaqiiq, Waa arki doontaan Naarta ololeysa.
Oo misna, waa arki doontaan aragti dhab ah.
Waxaana la idin weydiin doonaa Maalintaas Nicmaddii (aad ku jirteen adduunkan.)
Waa igu Casarka (waqtiga).
Xaqiiqdii! Aadanuhu wuxuu ku sugan yahay khasaaro.
Marka laga reebo kuwa (Xaqa) rumeeyey oo fala camallo wanaagsan oo suubban, oo isu dardaraama xaqa, oo isu dardaarama sabarka.
Hoog waxaa leh mid kastoo ah ceebeeye, iyo xantaa. 1
Oo maal jamciya 00 tirsada (00 aan Xaqa ku bixin);
Ma wuxuu moodaa in maalkiisu waarinayo?
Mayee! Waxaa lagu tuuri doonaa Naarta burburisada ah.
Oo maxaa ku ogeysiiyey waxa Naarta burburisada ahi tahay?.
Waa Naar Ilaahay 00 la huriyey.
Oo gubaysa quluubta (kuleyl) dartiis,
Waana laga dabooli doonaa Naartaas gaalada.
Waxayna ahaan tiirar la taagay dhexdood.
Mawaadan (Muxammadow jjg) ogaan sida Rabbigaa u galay qoladii maroodiga. (Ciidankii maroodiga ee ka yimid Yamanta, uu hoggaaminayey Abraha Al- Ashram isagoo doonayey inuu dumiyo Kacbada ku taal Makka)
Sow (Allaah) kama uu dhigin dhagartoodii wax dhumay?
Oo ku soo dirin shimbiro guutoooyin ah.?
Oo ku tuureysa dhagaxyo la kululeeyey.
Markaasuu ka yeelay sidii bal la daaqay.
Ay ka caadeysteen safarka xagaaga iyo (ffj), yJA \_j Az jjf jilaalka darteed.
Ee ha caabudeen (Allaah) Rabbiga Baydkan (Kacbada ku taal Makkah)).
Ee ka quudiyey gaajada, kana nabad galiyey cabsi.
Ka warran kan beeniya Jaazeynta (Qiyaamaha).
Kaasu waa kan sida xun ula dhaqma agoonta.1
Oo aan ku boorrin (dadka) quudinta masaakiinta.2
Ee waxaa hoog leh kuvvaa tukada salaadaha (munafiqiinta),
Ee ka dib dhiga salaaddooda waqtiyadii loo xaddiday.
Ee dadka is tusiya,
oo u diida alaabta laysugu kaalmeeyo.
Waxaan xaqiiqdii ku siinnay (Muxammadow 3?j§) Al-Kowthar (webi ku yaal jannada).1
Ee u tuko Rabbigaa Dartiis, oo u qal xoolaha weyneyn iyo xusid Isaga oo Keliya).
Kii ku neceb (Muxammadow ^), _waa mid cirib beelay.”
“Anigu ma caabudayo waxa aad caabudaysaan,
“Oo idinku ma caabudaysaan waxa aan Anigu caabudayo.
“Oo anigu ma caabudidoono waxaad Caabudaysaan.
“Oo Idinkuna ma caabudi doontaan waxa aan anigu caabudayo.
Idinku diintiinna (dhaqankiinna) baad leedihiin, aniguna diinteyda (dhaqankeyga).”
Marka uu yimaado Gargaarka Allaah iyo furashada (Makkah).
Oo aad aragto dadku oo u soo galaya diinta Ilaahay rac-rac (kooxo),
Markaas ku tasbiixso Ammaanaha Rabbigaa, oo weydiiso Dambi Dhaafkiisa. Xaqiiqdii, (Allaah) waa Isaga Midka Aqbala Toobada oo Dambi Dhaafka Badan.
Waxaa hoogay labadii gacmood ee Abuu-Lahab (mid ka mid ah Nabiga adeerradi) oo hoog!1
Waxna uma tarin maalkiisii iyo wixii uu kasbaday
waxaa lagu gubi doonaa Naar ololeysa
Marwadiisuna waa sidoo kale, taasoo qaadda qoryo [qodxihii Sacdaan ay dhigi jirtay waddada Nebiga ama aflagaadeyn jirtay]
qoorteeda waxaa ah xarig la falkiyey oo Masad ah [xaskul la soohay]
Dheh [Muxammadow] “Allaah waa Axad [mid keliya aan laheyn shariik]”
Waa Samad [Sayid deeqtoon, ay uumanka oo dhammi u baahan yihiin]
“ma dhalin, oo lama dhalin”2
“oo ma jiro axad u dhigma.”
Dheh: “Waxaan ka magan galay Rabbiga oogga (dillaaciya.)
“Sharka waxa uu abuuray;
“Iyo sharka habeenka marka uu madoobaado.
“Iyo sharka sixiirowga wax ku tufa guntimaha.
“Iyo sharka xaasidka marka uu wax xasdo.”
Dheh: “Waxaan ka magan galay Rabbiga dadka.1
“Sharka waswaasiyaha (sheydaanka) qarsoon ee soo noqnoqodka badan)1 2
Kaasoo waswaasiya laabaha dadka
(Shaydaankaa) oo jin iyo dadba leh.”
← Aqoonyahan – Warside	Godadle: Dhacdo Dhab ah →